Buug-gacmeedka Ardayga - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Soo dhaweynta Kormeeraha guud
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaad dooratay Dugsiyada Aagga Robbinsdale, halkaas oo aan diiradda saareyno horumarka ilmaha oo dhan, oo ay ku jiraan waxbarashadooda iyo sidoo kale baahiyaha bulshada iyo shucuurta. Aragtidayada Midaysan ee Degmada (UDV) waxay xoojineysaa dhammaan ardayda inay leeyihiin fursado aan xad lahayn. Degmo ahaan, waxaannu leenahay mas'uuliyadda laba-geesoodka ah ee ah ka-qaybgalidda bartayaasha iyadoo la ballaadhinayo codadka ardayda. Wadashaqeynta aan la leenahay ardayda iyo qoysaska waxay muhiim u tahay fahamka sida xulashooyinka wanaagsan ay saameyn ugu yeeshaan khibradaha waxbarashada iyo saameynta natiijooyinka guuleysta.
Waxaan ku dhiirrigelinaynaa qoysaska inay si wadajir ah dib ugu eegaan buug-gacmeedkan. Waxaan rumeysan nahay in daqiiqadaha wax la bari karo lagu suurta galiyo iyadoo la dhisayo jawi wanaagsan oo iskuul leh oo taageera. Waxaan ku faraxsanahay inaan kula wadaagno inta ardaygaagu sii wato safarkiisa waxbarasho!
2020-2021 Buugga Tacliinta iyo Habdhaqanka Ardayda
Buug-gacmeedka ardayda ee 2020-2021
Aragtida Degmada ee Mideysan: Waxqabad Maskaxeed Sare oo Sinaansho
Himilada Dugsiyada Robbinsdale Area waa inay dhiirrigeliso waxna baraan dhammaan ardayda si ay u horumariyaan awooddooda gaarka ah oo ay si togan wax ugu taraan bulshadooda.
Aragti Degmo Mideysan
Dugsiyada Robbinsdale Area waxaa ka go'an inay hubiyaan in arday kasta oo ka qalin jabiya xirfadiisa, xirfadaha xirfadaha leh iyo kulleejku diyaar u yahay. Waxaan aaminsanahay in arday kastaa leeyahay fursado aan xad lahayn waxaanan ku dadaalnaa inaan shidno kartida arday kasta. Waxaan ka rajeyneynaa waxqabad sare oo aqooneed dhammaan ardaydayada. Waxaa naga go'an inaan hubinno waayo-aragnimo waxbarasho oo loo siman yahay oo ixtiraam leh arday kasta, qoys walba iyo xubin kasta oo shaqaale ah, iyadoo diiradda la saarayo awoodaha la xiriira:
Hoyga ama Afka koowaad
Himilada Midaysan ee Degmada wuxuu ka kooban yahay afar yoolal oo muhiim ah:
Hirgelinta siyaasadaha iyo dhaqamada u furaya wadiiqooyinka heer sare ee tacliimeed ee dhammaan ardayda
Ka faa'iideyso waxbarista dhaqan ahaan ka jawaabta iyo barashada shaqsiyan ee dhammaan ardayda
Ka qaybgal xubnaha qoyska iyo bulshada sidii shuraako
Ka hawlgal oo Awood siiya ardayda adoo kordhinaya codka ardayda
Waxbadan ka baro Aragtida Mideysan ee Degmada.
Ku dhammaystirka himilada degmada midaysan sinaan
Shaqadeenna si aan u buuxinno shuruudaha Xoogga Adduunka ugu Fiican uguna noolaano Aragtidayada Degmada Midaysan (UDV), waxaan soo dhoweyneynaa qiyamka soo socda ee la wadaago, oo waxaan u qaadaneynaa qaab-dhismeedka dadaalkeenna wadajirka ah ee aan ugu diyaarinayno arday kasta inuu horumariyo kartidiisa gaarka ah . Waxaan ballanqaadeynaa inaan hubinno caddaalad, sinnaan iyo ka mid noqosho mabaadi'da aasaasiga u ah degmadeena, iyadoo si buuxda loogu mideynayo mabaadi'daas dhammaan maamulkeenna, hoggaankeenna,
siyaasadaha, barnaamijyada, howlaha iyo ku dhaqanka. Waxaan ballanqaadeynaa inaan bixinno dhaqan ballaaran oo degmada oo dhan ah:
Waxay haysaa rajooyin sare oo ardayda iyo shaqaalaha ah, iyada oo loo marayo qadarinta qaabab kala duwan oo waxbaris iyo waxbarasho.
Waxay u oggolaaneysaa fursado shaqsiyeed shaqsiyeed oo nidaamsan oo taageera macallimiinta iyo ardayda.
Si ula kac ah looga faa ideysto manaahijta dhaqan ahaan laxiriira iyo jawaabta leh, iyo dariiqooyinka balaarinaya helitaanka fursadaha waxbarasho iyo guusha nolosha oo dhan.
Aqoonsiga, kobcinta iyo ku-dhaqanka hababka ugu fiican ee wax-u-barashada ee sida muuqata u sameeyay isbeddel wanaagsan ardayda si loo yareeyo nusqaamaha natiijada barashada baahsan.
U qoondee dhaqaale badan, raasumaal iyo ilaha aadanaha ee RAS si siman.
Fududeynta helitaanka sinnaanta ee manhajka iyo manhajka dheeraadka ah, adeegyada bulshada, umeerin, iyo fursado kobcin.
La shaqee, lana shaqee qoysaskeena, ardayda, dadka deegaanka, jaaliyadaha, iyo daneeyayaasha kor u qaadka ku lug lahaanshahooda firfircoon iyada oo qayb muhiim ah ka ah mas'uuliyadda degmada ee maamul wax ku ool ah oo loo siman yahay.
Guddigu wuxuu leeyahay rajada dhammaan go'aan qaadayaasha degmo iyo dugsi, macallimiinta, maamuleyaasha, iyo shaqaalaha kaleba waxay kula xisaabtami doonaan inay dhisaan dhaqanka degmada ee sinnaanta. Kormeeraha guud waxaa loo xilsaaray inuu sameeyo qorshe leh heerar iyo isla xisaabtan la qiyaasi karo oo si daah furan loogu soo sheegi karo dadweynaha. Siyaasadda sinnaanta waa muraayada hagaya siyaasadaha jira iyo kuwa mustaqbalka ee saameeya barashada ardayda iyo qoondaynta kheyraadka. Nidaamka horumarinta siyaasadeena degmadeena ayaa ka faa'iideysan doona fikradaha laga qabo siyaasadda sinnaanta.
Siyaasadda Sinnaanta ee Dugsiyada Xaafadda Robbinsdale ayaa dib loo eegi doonaa sannad walba waxaana ansixin doona Guddiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Siyaasadda Sinnaanta ee degmada.
Bayaanka Dugsiyada Badbaadada iyo Madaniga ah
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay aqoonsadeen muhiimada ay leedahay taageerida jawiga iyo dhaqanka wanaagsan ee iskuulka, iyo waliba kordhinta taageerada ardayda iyo shaqaalaha degmada oo dhan. Iskuullada Badbaadada iyo Madaniga ah ayaa loo qaatay qaab dhismeedka degmada ee lagu xoojinayo barashada iyo ka-qaybgalka dhammaan goobaha dugsiga. Ujeedada Dugsiyada Badbaadada iyo Madaniga ahi waa in la taageero macallimiinta iyo shaqaalaha dugsiga si loo abuuro xalal wax ku ool ah, oo wax ku ool u ah dabeecadaha dhibaatada leh ee dugsiga ka jira.
Marka lagu daro Buug-gacmeedka degmada oo dhan, dugsi kastaa wuxuu soo saaray qorshayaal laga filayo / dabeecadaha dugsiga oo dhan, iyo macallimiinta ruqsadda haysta waxay leeyihiin qorshayaal maareyn iyo nidaam anshax oo u dhigma falsafada Dugsiyada Badbaadada iyo Madaniga ah. Qorshahan waxaa ka mid ah xeelado wax lagu barayo laguna dhiirigelinayo dabeecadaha laga filayo. Macallin kastaa wuxuu qorshihiisa ula socodsiiyaa waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah iyo ardayda - oo ay ku jiraan xeeladaha waxbarista iyo xoojinta dhaqanka, iyo istaraatiijiyadaha lagu bixinayo cawaaqibka dabeecad wanaagsan iyo mid xunba.
Mas'uuliyadaha Wadaagga ah
Kordhinta Badbaadada, Hawlgelinta iyo Mas'uuliyadda
Amniga iyo amniga ardayda oo dhan ayaa ah ahmiyadeena ugu sareysa, waxaana naga go'an inaan siino jawi waxbarasho oo kobciya. Ujeeddadeenu waa inaan siino tilmaam wax ku ool ah, edbin ah ardayda ku guuldareysata inay ka soo baxaan waxyaabaha laga filayo akhlaaqda. Si loo hubiyo jawi waxbarasho oo wanaagsan dhammaan goobaha degmada, dhammaan daneeyayaashu waxay leeyihiin door muhiim ah.
Waalidiinta / Masuulada
Rumayso inaad leedahay awood aad ku noqon karto naftaada ugu fiican uguna guuleysan karto himilooyinkaaga iyo himilooyinkaaga.
La dhiso lana ilaaliyo cilaaqaadka wanaagsan dhammaan shaqaalaha iyo ardayda kale.
Ixtiraam naftaada, jawiga waxbarashada, ardayda kale, waalidiintooda / ilaaliyaashooda, qoysaska iyo dhammaan shaqaalaha.
Weydiiso oo aqbal caawinta marka aad u baahan tahay caawimaad.
Aad dugsiga maalin kasta waqtigeeda, diyaarna u ah inaad waxbarto oo aad siiso dadaalkaaga ugu fiican.
Baro oo raac waxyaabaha laga filayo iskuulka iyo nidaamka.
U adeegso tikniyoolajiyad iyo qalab si masuuliyad leh.
Shakhsiyeeyo barashadaada adoo u keenaya hal-abuurkaaga shaqooyinkaaga.
Ku dhaqan naftaada hab lagu hubinayo badbaadadaada iyo badbaadada dadka kale.
Rumayso in ilmahaagu leeyahay awood uu ku noqdo naftiisa ugu fiican uguna guuleysto himilooyinkiisa iyo hamigiisa.
Dhis iyo xiriir wanaagsan oo lala yeesho shaqaalaha dugsiga.
Tixgalinta iyo taageerida bay'ada wax barashada iyo xoojinta muhiimada ay leedahay in loo diyaar garoobo iskuulka.
Weydiiso caawimaad markaad u baahan tahay gargaar. U doodi ilmahaaga wada xiriir joogto ah oo lala yeesho shaqaalaha dugsiga.
Hubso in ilmahaagu yimaado dugsiga maalin kasta waqtigiisa oo loo diyaariyo inuu waxbarto.
Baro, oo kala hadal ilmahaaga waxyaabaha laga filayo iyo nidaamka dugsigooda.
Dib u fiiri heshiiska tikniyoolajiyada ilmahaaga.
Ku dhiirigeli ilmahaaga xiisaha uu u qabo inuu wax barto kuna koriyo himilooyinkooda ku aaddan kuleejka, xirfadaha xirfadaha leh iyo xirfadda.
La xiriir dugsiga ilmahaaga haddii aad u kuurgasho ama aad ka warqabto dhaqdhaqaaqyo ama xaalado aan ammaan ahayn.
Shaqaalaha Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Ardayda aamminsan waxay awood u leeyihiin inay noqdaan naftooda ugu wanaagsan ayna gaaraan himilooyinkooda iyo himilooyinkooda, shaqaaluhuna waxay leeyihiin awood ay ku taageeraan ardayda.
La dhiso lana ilaaliyo cilaaqaadka wanaagsan dhammaan ardayda iyo qoysaskooda.
Samee bulsho barasho iyo jawi xushmad leh oo taageera bulshada-shucuurta iyo guusha waxbarashada.
Si joogto ah ula xiriir ardayda iyo qoysaska. Ku taageer markay caawimaad weydiistaan.
Abuur jawi soo dhaweyn leh. Rajo weyn ka qab ardayda oo dhan.
Bar, tusaalee oo xoojiya rajooyinka iyo nidaamka iskuulka. Raac qorshaha edbinta ee dugsiga oo dhan.
Tilmaamid ku habboon oo loogu talagalay codka ardayga iyo doorashada ku habboon jawiga barashada tikniyoolajiyadda.
Bixiyaan waxbarid shaqsiyeed, kaqeybgal iyo tacliin ahaan ku habboon, oo ay kujirto waxbarid dhaqan ahaan kajawaabeysa oo mataleysa oo martiqaadaysa aqoonsiyada ardayda.
Abuur oo ilaali xaaladaha nabdoon ee iskuulka.
Nidaamyo Taageero oo Tirooyin Badan Leh
Nidaamka Taageerada ee Tirooyinka Badan (MTSS) waa qaab lagu caawiyo dhammaan ardayda inay guuleystaan iyadoo la waafajinayo waxqabadyada, waxbaridda iyo qiimeynta baahida shaqsiyadeed ee ardayda. Waa iskuul dhan, xog-kaxeynaya, qaab-dhismeed kahortag ku saleysan oo lagu hagaajinayo natiijooyinka wax-barasho ee arday KASTA iyada oo loo marayo taxanaha lakabyada nidaamyada ku saleysan caddeynta. MTSS waxaa ku jira barashada bulshada iyo shucuurta (SEL) iyo barashada tacliinta iyo taageerooyinka.
Sida laga soo xigtay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (2017): “Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE) waxay u ololeysaa adeegsiga MTSS si loo kordhiyo tirada ardayda la kulmeysa heerarka darajada iyo ka qalin-jabinta xirfadaha waxbarasho dheeraad ah iyo shaqooyin. Inta badan shaqada MDE ee MTSS waxay kuxirantahay hirgalinta Heerarka Tacliinta ee K-12 ee Minnesota oo leh daacadnimo iyo dhisida waxqabadyo dheeri ah oo lagu kordhinayo hanashada ardayda ee dhammaan ardayda. ”
Yoolalka Buug-gacmeedka Ardayga
Iskuulada Robbinsdale Area, hadafkeenu waa inaan u abuurno jawi aamin ah oo taageero leh iyo dhaqan dhamaan ardaydayada. Sannad kasta, Guddiga Dugsiga ee Deegaanka Robbinsdale wuxuu qaataa buug-gacmeedka degmada oo dhan si uu u bixiyo tilmaamo ku saabsan baridda iyo hirgelinta dabeecadaha laga filayo.
Ardaydu waa inay raacaan Buug-gacmeedka degmada oo dhan ka hor, inta lagu jiro iyo ka dib dugsiga. Buug-gacmeedku wuxuu ku shaqeynayaa gudaha dhismayaasha dugsiga, barxadaha dugsiga, iyo howlaha la xiriira iskuulka iyo dhacdooyinka. Ardaydu sidoo kale waa inay raacaan sharciyadan inta ay ku safrayaan baabuurta ay maalgeliso Dugsiyada Aagga Robbinsdale. Markay akhlaaqda xumaantu ku lug leedahay isgaadhsiinta, tilmaamaha ama dabeecada muujinta, xadgudubku wuxuu khuseeyaa isgaarsiinta afka, qoraalka ama elektarooniga ah, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn qoraalka, emailka iyo xiriirinta bulshada
Habka Anshaxa Horusocod
Go'aaminta Jawaabta Anshaxa
Qiimayaasha Muhiimka ah ee Buug-gacmeedka Ardayga
Fahmitaanka edbinta sida "daqiiqad wax la bari karo" waxay aasaas u tahay habka wanaagsan ee edbinta. Ujeedada edbinta horusocodka ah waxay ka hortageysaa soo noqnoqoshada dhaqanka xun iyadoo laga caawinayo ardayda inay wax ka bartaan qaladaadkooda. Muhiim u ah hirgelinta edbinta horusocodka ah ayaa ka caawinaysa ardayda ku hawlan dabeecad aan la aqbali karin inay:
fahmaan sababta dhaqanku u yahay mid aan la aqbali karin iyo dhibaatada uu u geystay;
Fahmaan waxa ay ku qaban lahaayeen si ka duwan isla xaaladdii;
qaado masuuliyada ficilladooda;
bartaan tabaha bulshada iyo xirfadaha bulshada loo adeegsado mustaqbalka;
tusale iyo tabo badal tabo; iyo
Fahmaan horumarka cawaaqib xumada dabeecadda rekoor.
Jawaabaha anshax ee ku habboon waa inay xoogga saaraan ka hortagga iyo faragelinta wax ku oolka ah, kobcinta u adkeysiga, ka hortagga carqaladeynta waxbarashada ardayda iyo dhiirigelinta dhaqanka wanaagsan ee dugsiga.
Dadaal kasta oo macquul ah waa in lagu sameeyaa si loo saxo akhlaaqda ardayda iyadoo loo marayo waxqabadyada dugsiga ku saleysan sida dhaqamada soo celinta. Taageerada iyo dhexgalku waa lama huraan maxaa yeelay dabeecadaha aan habooneyn ama ku xad gudubka Xuquuqda iyo Mas'uuliyadaha Buug-gacmeedka Ardayga waxay astaan u noqon karaan dhibaatooyinka aadka u daran ee ardayda la kulmaya. Sidaas darteed, waxaa muhiim ah in shaqaalaha dugsigu u nugul yihiin arrimaha saamaynta ku yeelan kara dabeecadda ardayda oo ay uga jawaabaan qaab ugu taageeraya baahidooda.
Saraakiisha dugsigu waa inay la tashadaan dukumintigan markay go'aaminayaan tallaabooyinka edbinta ee lagu soo rogayo. Go'aaminta sida ugu wanaagsan ee wax looga qabanayo dhaqanka aan habooneyn, waxaa lagama maarmaan ah in la qiimeeyo wadarta xaaladaha ku xeeran dhaqanka. Waxyaabaha soo socda waa in la tixgeliyaa kahor go'aaminta tallaabooyinka edbinta ee habboon:
Da'da ardayga, biseylka, dhaqanka iyo heerka koritaankiisa
Diiwaanka edbinta ardayga oo ay kujirto dabeecadda akhlaaqdaro hore, tirada dhacdooyin hore ee anshax xumo, iyo talaabooyinka edbinta iyo kahortaga hagida ee lagu dabaqay mid kasta
Dabeecadda, darnaanta iyo baaxadda dabeecadda
Duruufaha / macnaha guud ee dhaqanku ku dhacay
Joogtada iyo muddada dhaqanku leeyahay
Tirada dadka ku lug leh dhaqanka
Xaaladda / baahida bulsho-shucuureed ee dhammaan dadka ku lugta leh dhaqanka
Qorshaha Faragelinta Dhaqanka Ardayga (BIP), haddii ay khuseyso
Barnaamijka Waxbarashada Gaarka ah ee ardayga (IEP), BIP iyo / ama Qorshaha Dejinta 504, haddii ay khuseyso
Himilada degmadu waa inay bixiso nidaam hab-dhaqan ah oo kordhin doona ka-qaybgalka ardayda, iyo dhisidda hanashada tacliinta iyo bulshada. Dhaqan celinta ayaa u oggolaaneysa bulshada dugsiga inay dhisaan xiriiro, xalliyaan dhibaatada, hagaajiyaan waxyeelada iyo inay bartaan. Hawlaha waxaa ka mid ah gorgortanka wadashaqeynta, habka goobaabinta, dhexdhexaadinta asxaabta, xallinta khilaafaadka iyo shirarka dib u soo celinta rasmiga ah. Qaabkan, cilaaqaadyadu waa habka ugu muhiimsan ee aan wax uga baranno adduunka iyo nafteenna.
Dugsiga tababarka dib-u-dhiska iyo bulshada ayaa aaminsan:
Qof kasta oo ka tirsan bulshada iskuulku waa mid wanaagsan, caqli badan oo awood badan
Dhamaanteen waan isku xirnahay
Dhammaanteen waxaan dooneynaa inaan ku jirno xiriir wanaagsan, caafimaad qaba dadka kale
Dhamaanteen waxaan leenahay karti iyo hadiyado aan ukeenno iskuulka
Waxay qaadataa waqti, caadooyin iyo taageero si loo dhiso loona ilaaliyo xiriir wanaagsan
Buug-gacmeedka Ardaygu wuxuu ka kooban yahay saddex qiimeyaal asaasi ah oo hagaya rajooyinka mid kasta oo ka mid ah afarta heer ee filashooyinka iyo istiraatiijiyadda sixitaanka. Qiyamyada asaasiga ahi waxay ka turjumayaan Aragtidayada Midaysan ee Degmada.
Qiimayaasha Muhiimka ah:
1. Amaan noqo.
2. Ku hawlan.
3. Masuul noqo.
Heer kastaa wuxuu soo bandhigayaa tusaalooyin ku saabsan dabeecadaha la filayo iyo tusaalooyinka xadgudubka ee seddexdan qiimaha asaasiga ah. Markii la barayo ardayda waxyaabaha laga filayo akhlaaqda, qiimayaashan asaasiga ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu naqshadeeyo barashada xirfadaha u ololeeya bulshada iyo horumarinta xeelado dhaqan beddel ah.
Heerarka Xeeladaha Saxitaanka
Buug-gacmeedku wuxuu ardayda kula xisaabtamayaa habdhaqankooda. Jebinta waxaa loo qaybiyaa afar heer oo horumar leh oo ku saleysan darnaanta xadgudubka. Markasta oo ay suurta gal tahay oo ay habboon tahay, jawaabta anshax-xumada waa inay ka bilaabataa heerka ugu hooseeya ee jawaabta edbinta waana inay ku jirtaa taageerooyinka iyo wax ka qabadka ku habboon.
Heer kastaa waxay bixisaa waxyaabaha laga filayo degmada oo dhan, tusaalooyinka dhaqanka la filayo, jebinta rajooyinka iyo xulashooyinka wax looga qabanayo xadgudubyada ardayda. Qeexitaanka dabeecad kasta waxaa lagu daraa dhamaadka heer kasta. Tusaalooyinkaan looguma talagalin liisas dhammaystiran; taasi waa, dabeecadaha lagu daboolay qeexitaannada waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, tusaalooyinka la bixiyay.
Filashooyinka Heerka 1aad iyo Istaraatijiyadaha Sixitaanka
Qeexitaanka Heerka 1aad ee Shuruudaha
Heerka 2 Filashooyinka iyo Istaraatijiyadaha Saxitaanka
Qeexitaanka Heerka 2aad ee Shuruudaha
Filashooyinka Heerka 3aad iyo Istaraatijiyadaha Sixitaanka
Qeexitaanka Heerka 3aad ee Shuruudaha
Filashooyinka Heerka 4aad iyo Istaraatijiyadaha Sixitaanka
Qeexitaanka Heerka 4aad ee Shuruudaha
Wax ka qabadka Heerka 1 guud ahaan waxaa wax ka qabta xubnaha shaqaalaha iskuulka marka ardaygu haysto ugu yaraan ama aan lahayn xadgudub hore. Jawaabta shaqaaluhu waa inay baraan kuna dhaqmaan dhaqanka laga filayo si ardaydu u bartaan una muujiyaan dabeecado aamin ah oo xushmad leh. Xubnaha shaqaalaha waxaa laga filayaa inay adeegsadaan xeelado kala duwan oo waxbaris iyo maamul.
Waxyaabaha Laga Filayo Degmooyinka
(Maxaa laga filayaa ardayda)
Dabeecadaha Laga Filayo
(Maxay tahay inay ardaydu sameeyaan)
(Maxay tahay inaan ardaydu sameyn)
Kala-doorashada si wax looga qabto xadgudubyada ardayda
(Kuwani looguma talagalin inay noqdaan xulashooyinka kaliya ama isku xigxiga)
Isticmaal isgaarsiin tixgelin leh
Raac filashooyinka akhlaaqda ee dugsiga oo dhan una hogaansanaada sharciyada fasalka, caadooyinka iyo nidaamka
Ku howlan Xiriir aan habooneyn
Adeegso Dabeecad qas ah
Wax ka beddelidda kuwa waxyeelloobay ama xumeeyey
Bixinta waxqabad milicsiga ah
Dib-u-dhigista rajooyinka akhlaaqda
Abuuritaanka qandaraas dhaqan oo ay ku jiraan dabeecadaha ardayga laga filayo iyo cawaaqibka xadgudubyada iyo / ama dhiirrigelinta muujinta dhaqanka la filayo
Adeegga bulshada ee dugsiga
Ka saarida fasalka ilaa fasal kale oo kormeer ah (in ka yar hal saac)
Xiritaanka, inta lagu gudajiro ardaygu uu dhameeyo shaqada iskuulka
Barnaamijyo kale oo waxbarasho oo gudaha ah, oo inta lagu jiro howsha iskuulka lagu dhammeeyo, in ka yar maalin badhkeed
Ka joojinta iskuulka gudaheeda, inta lagu jiro howsha iskuulka la dhammeeyo, in ka badan nus maalin
Raac jadwalka jadwalka dugsiga oo dhan oo ku imow waqtiga fasalka
Dhageyso dadka waaweyn oo raac tilmaamaha
Soo Bandhigid Daahitaan Dabadheeraad ah (Fasalada 6-12)
Ku Guuldareysiga Raac Tilmaamaha
U isticmaal aaladaha isgaarsiinta sida waafaqsan nidaamka dugsiga
Ka qaybgal Khiyaano / Bixi Aqoonsi Been ah
U Adeegso Qalabka Isgaarsiinta Elektarooniga ah ku xadgudubka Nidaamka Dugsiga
Daahitaan daba dheeraada (Fasalada 6-12)
Ardayda waxaa laga filayaa inay raacaan waxyaalaha laga filayo jadwalka dugsiga oo ay ku yimaadaan waqtigii loogu talagalay fasalka. Ardaydu waa inaysan caadeysan inay yimaadaan fasalka kadib marka jalaska la maqlo ama la muujiyo in fasalku bilaabmay.
Dabeecad qas ah
Ardayda waxaa laga filayaa inay raacaan waxyaabaha laga filayo habdhaqanka dugsiga oo dhan una hoggaansamaan xeerarka fasalka, caadooyinka iyo nidaamka. Ardaydu waa inaysan carqaladeynin barashada dadka kale ama ay udhaqmaan qaab carqalad ku keenaya deegaanka iskuulka. Haddii macallin ama qof kale oo weyn oo iskuul ah laga hor istaago inuu bilaabo waxqabad ama cashar, ama ay tahay inuu joojiyo waxa uu sameynayo ama isagu sameynayo si uu isugu dayo inuu u joojiyo anshaxa ardayga, anshaxa waxaa loo arkaa mid carqaladeyn kara. Tusaale ahaan, haddii ardaygu uu carqalad ku keeno fasalka isaga oo hadlaya, buuq sameeya, wax tuuraya, dagaal ciyaar, faras ama haddii kale uu mashquulinayo mid ama in ka badan oo fasalkiisa ah, ardaygu wuxuu ku kacayaa dhaqan qas ah.
Qalabka Isgaarsiinta Elektarooniga ah
Qalabka elektarooniga ah waxaa loo keeni karaa dugsiga keliya iyadoo la raacayo nidaamka dugsiga. Ardaydu waa inay adeegsadaan aaladaha isgaarsiinta iyadoo la raacayo nidaamka iskuulkooda (iskuulku wuxuu dooran karaa inuu sameeyo qorshe cayiman oo laxiriirta isticmaalka qalabka elektarooniga ah). Qalabka isgaarsiinta elektiroonigga ah waa in la demiyaa inta lagu jiro saacadaha iskuulka mooyee haddii aysan u oggolaanayn siyaasadda dugsiga.
Ka gaabinta Raacitaanka Tilmaamaha
Ardayda waxaa laga filayaa inay raacaan tilmaamaha shaqaalaha dugsiga. Shaqaalaha dugsiga waxaa ka mid ah maamuleyaasha, macallimiinta, kaaliyeyaasha waxbarashada (EAs), xoghayayaasha, shaqaalaha amniga, ilaaliyeyaasha, wadayaasha basaska, shaqaalaha qolka qadada, mutadawiciinta dugsiga, iwm. waxaa loo arkaa caasi.
Khiyaano / Aqoonsi Been ah
Ardayda waxaa laga filayaa inay daacad noqdaan. Ardaydu waa inaysan saxeexin ama bixin magac aan magacooda ahayn.
Xiriir aan habooneyn
Ardayda waxaa laga filayaa inay si qadarin leh ula hadlaan dadka kale. Tusaalooyinka wada xiriirka aan habooneyn waxaa ka mid ah is-dhig, cay, hanjabaad, ku kaftamid, ama si xun uga hadlida qof ama qoyskiisa.
Xadgudubyada Heerka 2 guud ahaan waxay sababi doonaan faragelin iyo / ama jawaab celin edbin ah oo ku lug leh maamulka dugsiga. Ficilladani waxay ujeedadoodu tahay inay saxaan akhlaaqda iyagoo ku adkeynaya halista akhlaaqda iyadoo ardayga lagu haayo dugsiga.
Dhammaan wada xiriirka ka socda dugsiga waa in loogu qabtaa si naxariis leh
Xalinta khilaafaadka si nabad ah
La xiriir asxaabta iyo dadka qaangaarka ah ee ku howlan dabeecad aamin ah, xushmad iyo masuuliyad leh
Ilaali caafimaadkaaga iyo badbaadadaada, iyo caafimaadka iyo badbaadada dadka kale
Raac sharciga ku saabsan gubashada
Ku mashquul Dhibaataynta
Adeegsiga aan habooneyn ee Teknolojiyada Elektarooniga ah
Ka qaybgal Xiriir Jidh aan habboonayn (Waxyeello jidh ahaaneed)
Isticmaalka Tubaakada / Sigaar cabidda
Isticmaal / Haysasho Shidaayaasha - Dugsiga Hoose
Ogeysiinta waalidka / ilaaliyaha
Shirka waalidka / masuulka
Soo celinta lacagta
Ka saarida maalin isku xigta (ilaa shan) fasal kale oo kormeer ah inta lagu jiro maadada loogu talagalay
Waxbarasho iskuul oo kale ah
barnaamij, inta lagu guda jiro hawsha iskuulka la dhammeeyo, in ka yar nus maalin
Waqtiga iskuulka laga joojinayo, inta lagu jiro howsha iskuulka la dhammeeyo, in ka badan nus maalin
U gudbinta u-hawlgalayaasha habdhaqanka ee ku xadgudubka tubaakada / kiimikada
Ogeysiiska booliska ee suurtogalka ah
Iskuulka joog inta lagu jiro dhammaan saacadaha iskuulka
Noqo Mid Ba'an (Fasalada 6-12)
Ka taxaddar hantida dugsiga
Adeegso waxyaalaha aad iska leedahay haddii aan oggolaansho cad laga helin milkiilaha si loo siiyo amaah amaah
Ka Qaybgal Khasaare / Burburin Hantida (Ka Yar $ 500)
Ku howlan Xatooyo Yar / Hantida Hanti La Xaday (Kayar $ 500)
Ardayda waxaa laga filayaa inay qabsadaan shaqadooda. Ardaydu waa inaysan isticmaalin, soo gudbin ama isku dayin inay helaan xog ama jawaabo si daacadnimo la'aan ah, khiyaano, iskudhac ama qaab kale oo aan ahayn kuwa uu fasaxay macalinka. Tusaalooyinka falalka qishka / xatooyada waxaa ka mid ah wax kasta oo loo qoondeeyay, xatooyo suugaaneed, been abuur, been abuur, burcad-badeednimo, khiyaano ama lahaansho aan la ilaalin oo ah imtixaanno federaal, gobol-ama degmo-sharciyeysan. Xatooyada waxaa ka mid ah, laakiin maya
ku xaddidan, ereyga erey ahaan uga soo guurinaya tixraacyada sida buugaagta, joornaalada, qalabka baaritaanka ama internetka.
Adeegsiga aan habboonayn ee Teknolojiyada elektarooniga ah
Ardayda waxaa laga filayaa inay u isticmaalaan tikniyoolajiyadda iyo ilaha kale hab nabadgelyo iyo masuuliyad leh. Ardaydu ma sameyn karaan, soo saari karaan ama qeybinayaan fiidiyowyo, sawirro, duubitaan cod ama waxyaabo kale oo dhexdhexaad ah oo muujinaya dabeecadda ay mamnuucday Xuquuqda Buug-gacmeedka Ardayga iyo Mas'uuliyadaha ku saabsan hantida dugsiga ama dhacdooyinka dugsiga, oo ay ku jiraan isticmaalka aaladaha elektarooniga ah ee shakhsiyadeed ama shakhsiyadeed (ie, laptops, Chromebooks, ipads, kiniiniga, akhristayaasha elektarooniga ah, taleefannada gacanta ama fiidiyoowga ama wali kaamirooyinka). Sawirrada dhaqamada noocaas ah ee ku saabsan baraha bulshada sida Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat ama degello kale oo la mid ah waa mamnuuc. Wakiilo kasta oo ka mid ah anshaxa la mamnuucay waa in isla markiiba lagu wareejiyaa maamulaha ama wakiilka maamulaha. Soo-saarista iyo qaybinta alaabtaan waxay ku dambayn doontaa tallaabo edbin ah.
Ardaydu waa inay doortaan ciyaaro la jaan qaadaya dabeecadaha laga filayo Buug-gacmeedka Xuquuqda iyo Mas'uuliyadaha. Ardaydu waa inaysan ku ciyaarin kaararka kaararka, jaaniska ama laadhuuqa lacag ama waxyaabo kale, marka laga reebo haddii ciyaaraha noocan oo kale ah lagu ciyaaro waxqabad uu dugsigu soo abaabulay ujeeddooyin waxbarasho.
Dhammaan wada xiriirka ka socda dugsiga waa in loogu qabtaa si naxariis leh. Ardaydu waa inaysan u adeegsan ereyo (qoraal, hadal, elektiroonig ah), dhaqdhaqaaqyo, sawirro sawirro ah, sawirro ama nooc kasta oo xiriir ah si loogu dhibaateeyo qof kale. Tan waxaa ka mid ah dhibaateynta ku saleysan jinsiga, jinsiga, diinta la aaminsan yahay, dhalashada, naafonimada ama nooca galmada. Eeg Siyaasadda Guddiga 413: Dhibaateynta iyo Rabshada si aad u hesho macluumaad faahfaahsan.
Xatooyo Yar / Hantida Hanti La Xaday (Kayar $ 500)
Ardaydu waa inay adeegsadaan oo keliya waxyaalahooda gaarka ah illaa oggolaansho cad laga helo milkiilaha oo aan la siinin inay wax amaahdaan. Ardaydu waa inaysan qaadan wax aan iyaga aheyn. Ardaydu waa inaysan haysan wax ay yaqaanaan, ama ay leeyihiin sabab ay ku ogaadaan, in la xaday. Ardaydu waa inaysan u isticmaalin qalab iskuulku leeyahay ama qalab shaqsiyeed inay ku dhaqaaqaan howlo sharci darro ah.
Xiriirka Jirka (Waxyeello jidh ahaaneed)
Ardaydu waa inay caawimaad helaan markay u baahdaan inay xalliyaan dhibaatooyinka si aan rabshad lahayn. Ardaydu waa inaysan ku lug yeelan xiriir aan dhab ahayn laakiin aan ku habboonayn, sida riixid, ciyaar dagaal iyo cabsi gelin.
Burburka Hantida / Burburka (Kayar $ 500)
Ardaydu waa inay daryeelaan hantida iskuulka. Ardaydu waa inaysan waxyeelayn, jebin, burburin ama si xun u adeegsan hantida dugsiga ama wax qof kale iska leeyahay.
Tubaakada / Sigaar cabidda
Ardayda waxaa laga filayaa inay ilaashadaan caafimaadkooda iyo badbaadadooda, iyo caafimaadka iyo badbaadada dadka kale. Ardaydu waa inaysan haysan, sigaar cabbin ama aysan isticmaalin nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha tubaakada ama waxyaabaha la xiriira oo ay ku jiraan sigaarka elektarooniga ah iyo uumiga.
Fasax (Fasallada 6-12)
Ardayda waxaa laga filayaa inay dugsiga joogaan. Ardayda ma heli karaan "maqnaansho cudurdaar la'aan" 1⁄2 maalin ama ka badan.
Adeegsiga / Haysashada Gubtayaasha - Dugsiga Hoose
Ardaydu waa inay u hogaansamaan sharciga ku saabsan waxyaabaha gubta. Ardaydu waa inaysan isticmaalin ama haysanin walxaha / walxaha awood u leh inay jidhka u geystaan waxyeelo iyo / ama waxyeelo hantiyeed (taraqyada, laydhadhka, baaruudda, shidaalka, dareeraha khafiifka ah, iwm.).
Xadgudubyada Heerka 3 guud ahaan waxay keeneysaa faragelin iyo / ama jawaab celin edbin ah oo ku lug leh maamulka dugsiga. Ficilladani waxay ujeeddadeedu tahay inay saxaan dabeecadda iyagoo xoogga saaraya halista akhlaaqda iyadoo la siinayo marin u helidda barnaamijyada waxbarashada.
U hogaansanaato sharciyada la xiriira badbaadada dabka
Raadso caawimaad marka loo baahdo si loo xaliyo dhibaatooyinka si aan rabshad lahayn
Si nabad ah ula falgal asxaabtaada
U soo qaado walxaha iyo walxaha dugsiga loo baahan yahay ee barashada iyo kaqeybgalka waxqabadyada
Joogtee jawi waxbarasho oo aamin ah oo wax soo saar leh
U hogaansan xadka xawaaraha iyo calaamadaha taraafikada
Joogtayno soohdimaha ku habboon ee aad la leedahay facooda
Ilaali caafimaadkaaga iyo badbaadadaada, iyo caafimaadka iyo badbaadada dadka kale Ixtiraam dadka kale iyo go'aanadooda
U naxariiso dadka kale
Digniinta Dabka Beenta ah ama Warbixinada Bamka / Wax yeelista Nidaamka Digniinta Dabka
Ka Qayb Qaado Rabshadaha Kooxda *
Ka Qaybgal Xiriirka Jirka ee Waxyeellada leh *
Ka qaybgal Jirka
La xiriir Shaqaalaha
Haysashada / Adeegsiga Hubka kale ama Waxyaabaha, ma ahan qori iyo ma buuxinayo Qaanuunka Minnesota ee qeexida hubka khatarta ah, oo aan ujeedo lahayn
Burburka Hantida / Waxyeelada (Ka Badan $ 500)
Ku Mashquul Khashkhashaad
Darawalnimo aan taxaddar lahayn
Ku Dhexgal Dabeecad Aan Ku Haboonayn Galmada
Adeegsiga / Haysashada Guban - Secondary
Isticmaalka / Haysashada Maandooriyaha, Aalkolada ama Waxyaabaha Kale ee La Xakameeyo
Ku howlan Baad / Dhac
* Iyadoo lagu saleynayo darnaanta
dhacdo iyo / ama dhowr dhacdo
dagaal, rabshado kooxeed ama
taabashada jirka ee waxyeelada leh ee heerka dugsiga sare waxay sababi kartaa dib u eegis edbin ah oo degmada ah
xafiis ama lagu tilmaamo inay tahay dabeecad heerka 4aad ah.
Ka joojinta iskuulka ka baxsan (maalin qayb ah iyo ilaa shan maalmood)
Ka saarida fasalka
Shirka wada hadalka ee xafiiska degmada
Dib u eegista maamulka
Joog meelaha loogu talagalay ee dugsiga loo qoondeeyay
Ku xad gudubka, oo ay ku jiraan mudada xil ka qaadista ama ka joojinta shaqada
Sameynta Tuugnimo Weyn / Haysasho Hanti La Xaday (In ka badan $ 500)
Isgaarsiinta waa in lagu sameeyaa si naxariis leh. Xoog u sheegashadu waxay ka dhigan tahay cabsi gelin, hanjabaad, aflagaado ama anshax waxyeelo leh oo si ula kac ah u weerara iyo:
Waxaa jira isku dheelitirnaan la'aan dhab ah ama loo maleynayo inay udhaxeyso ardayga oo ku kacaya anshax mamnuuc ah iyo bartilmaameedka anshaxa, anshaxduna waa lagu celceliyaa ama qaab ayey u noqoneysaa; ama
Ficil ahaan si wax ku ool ah oo faragelin ku ah fursadaha waxbarasho ee ardayga ama waxqabadkiisa ama karti uu uga qeyb qaato howlaha dugsiga ama waxqabadyada ama uu ku helo dheefaha, adeegyada ama mudnaanta dugsiga.
Tan waxaa ka mid ah adeegsiga tikniyoolajiyadda ama isgaarsiinta elektiroonigga ah ee carqaladeysa waxbarashada ardayda ama deegaanka dugsiga. Eeg Nidaamka Guddiga 514: Mamnuuca Xoogsheegashada wixii macluumaad dheeraad ah.
Baad ama Dhac
Ardayda waxaa laga filayaa inay ixtiraamaan dadka kale iyo go'aanadooda. Ardaydu waa inay aqbalaan “maya” jawaab markay codsi ka dalbanayaan qof kale. Xadgudub micnaheedu waa lacag ama ballanqaad adoo adeegsanaya hanjabaad ama xoog. Ardaydu waa inaysan ku qasbin qofka inuu sameeyo wax uusan isagu ama iyadu rabin inuu sameeyo isaga oo adeegsanaya hanjabaad ama xoog. Ardaydu waa inaysan qaadan hantida qof kale. Ardaydu waa inaysan qaadan ama isku dayin inay mid kale ka qaataan
qof hanti kasta oo xoog ama hanjabaad xoog ah.
Ardaydu waa inay adeecaan sharciyada la xiriira badbaadada dabka. Ardaydu waa inaysan dhigin digniinta dabka waqti kasta haddii aysan jirin xaalad degdeg ah. Burburinta ama dhaawaca qalabka digniinta dabka waa mamnuuc. Ardaydu waa inaysan si been ah u wicin ama aysan warbixin u gudbin 911 ama shaqaalaha kale ee gurmadka.
Khilaafaadka waa in lagu xaliyaa si nabad ah. Ardaydu waa inaysan jir ahaan la dagaallamin qof kale. Dagaalku wuxuu ku lug leeyahay is-dhaafsiga is-taabashada jirka, tusaale, iska-tuurid, laad, timo jiida, qaniinyada iyo wax ku garaacid, dhaawac ama dhaawac la'aan (ie, dagaalka labada dhinac).
Ardaydu waa inay ula dhaqmaan si wanaagsan asxaabtooda. Ardaydu waa inaysan qorshayn, kicin ama kaqeyb galin mid kale ama kuwa kale, dhacdo rabshado kooxeed.
Ardaydu waa inay si nabadgelyo leh ula falgalaan asxaabtooda. Ku dhaqaaqida ficil ama ku qasbid arday inuu sameeyo ficil abuuraya halista ugu weyn ee waxyeelada mid si ardayga loogu bilaabo ama uga mid noqdo iskuulka ama kooxda iskuulka. Eeg Siyaasadda Guddiga 526: Mamnuuca Xayiraadda sharaxaad iyo macluumaad faahfaahsan.
Xiriirka Jirka ee waxyeelada leh
Ardaydu waa inay raadiyaan caawimaad si ay u xalliyaan dhibaatooyinka si aan rabshad lahayn. Ardaydu waa inaysan ku kicin dabeecad dagaal daran taas oo abuureysa khatar weyn ama natiijooyin dhaawac ah.
Xatooyo weyn / Lahaansho Hanti La Xaday (In ka badan $ 500)
Xiriirka Jirka ee Shaqaalaha
Ardaydu waa inay raadiyaan caawimaad si ay u xalliyaan dhibaatooyinka si aan rabshad lahayn. Ardaydu waa inaysan ku lug yeelan xiriir jireed xagga shaqaalaha. Ardayda ku lug yeelata xiriirka jir ahaaneed ee shaqaalaha waxaa laga yaabaa in laga joojiyo shan maalmood oo ganaax ah inta laga baarayo iskuulka. Ardayda waxaa lagu talin karaa dib u eegis maamul / dhageysi iyadoo lagu saleynayo natiijada baaritaanka.
Haysashada Hub kale ama Shay kale, oo aan ahayn qori iyo in aanu la kulmin qeexida hubka khatarta leh ee Minnesota, oo aan ujeedo lahayn
Ardayda waxaa laga filayaa inay keenaan walxaha iyo waxyaabaha dugsiga loo baahan yahay ee loogu talagalay barashada iyo kaqeybgalka waxqabadyada. Ardaydu waa inay ka ilaaliyaan hubka halista ah dugsiga. Hubka kale waxaa ka mid ah aalad ama qalab kasta - oo ay ku jiraan hub kasta oo aan caadi ahayn - kaas oo, qaabka loo isticmaalo ama loogu talagalay in loo isticmaalo, loo xisaabiyo ama laga yaabo inuu soo saaro waxyeelo jireed ama waxyeelo jidheed oo aad u weyn, ama cabsi laga qabo nooc kasta oo waxyeelo jidheed ah .
Hubka kale waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn middiyo leh garbaha ka hooseeya 2.5 inji, mindiyo been abuur ah, hub u eg, kooxo, biro jilbaha, silsilado, sunno, fallaaro, fiidmeerro, buurbuur, xiddigo tuuritaan, qoryo naxdin leh, malag iyo kuwa kale walxaha wax laga beddelay si ay hub ugu adeegaan, iwm.
Ardaydu waa inay daryeelaan hantida iskuulka. Ardaydu waa inaysan waxyeelayn, jebin, burburin ama si xun u isticmaalin hantida dugsiga.
Ardaydu waa inay u hogaansamaan xadka xawaaraha iyo calaamadaha taraafikada. Ardaydu waa inaysan ku kaxeyn dhismaha iskuulka qaab khatar galinaya dadka ama hantida.
Dabeecad aan Ku Haboonayn Galmada
Joogtayno soohdimaha ku habboon ee aad la leedahay facooda. Ardaydu waa inaysan ku lug yeelan habdhaqanka galmada, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, galmada, soo bandhigida ama qaybinta waxyaabaha galmada la xiriira, soo bandhigida anshax xumada iyo xiriirka galmada kale.
Ardayda waxaa laga filayaa inay gacan ka geystaan sidii loo ilaalin lahaa jawi waxbarasho oo nabdoon oo wax soo saar leh. Ardaydu waa inaysan ku lug yeelan ama u horseedin dabeecad carqalad abuureysa taas oo abuureysa khatar weyn (ama natiijooyin) dhaawac ama si weyn u carqaladeeya barashada (tusaale ahaan, tuurista kuraasta, keenista ka bixitaanka fasallada, oo ku sii jeedda meelaha aan nabdooneyn).
Ardayda waxaa laga filayaa inay u naxariistaan dadka kale. Ardaydu ma sameyn karaan hanjabaad afka ah, qoraal ama jir ahaaneed, saxiix, ama ficil ah oo xambaarsan ujeedo ah inay waxyeello ama rabshad keenaan, xitaa lagu kaftamo.
Ardaydu waa inay ku sugnaadaan aagag loogu talo galay ee dugsiga loogu talagalay. Ardaydu waa inay ogolaansho ka haystaan maamule dhisme, ama ay galbiyaan waalid / daryeel bixiye ama qof xiriir degdeg ah, si ay u galaan dhisme aan iyaga ahayn. Ardaydu waa inaysan ku laaban iskuul kasta inta loo qoondeeyay barnaamijyada Adeegyada Waxbarashada Kala Duwan, ama lagu jiro cayrin ama ka saarid, marka laga reebo ogolaanshaha dhismaha
maamule oo ay galbiyeen waalid / daryeel bixiye ama qof xiriir degdeg ah.
Inta lagu jiro meelaynta Adeegyada Waxbarashada Kale, ardaydu ma aadi karaan dugsi kasta, ama waxqabadyada dugsiga, oo aan ka ahayn dugsiga loo qoondeeyay, marka laga reebo oggolaansho iyo kormeer gaar ah sida ku xusan cutubkan.
Isticmaalka / Haysashada Dawooyinka, Aalkolada ama Waxyaabaha Kale ee La Xakameeyo
Ardayda waxaa laga filayaa inay ilaashadaan caafimaadkooda iyo badbaadadooda, iyo caafimaadka iyo badbaadada dadka kale. Ardaydu waa inaysan u keenin aalkolo ama daroogo sharci darro dugsiga ama nashaadaadka dugsiga. Ardaydu waa inaysan isticmaalin, ku hoosjiran saameyn ama aysan iibsan ama iibin aalkolo ama daroogo sharci darro ah. Qaybtani waxay sidoo kale khuseysaa walax kasta oo loo sameeyay inay u ekaato, ama lagu metelo inay tahay, daroogooyinka sharci darrada ah ama khamriga iyo wixii la mid ah ee la xiriira. Ardayda waxaa loo oggol yahay inay keenaan daawada loo qoray ama miiska lagu gato iskuulka oo keliya ogolaanshaha waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah iyo ogolaanshaha iyo kormeerida bixiyaha xanaanadooda caafimaadka iyo maamulaha iskuulka ama wakiilka maamulaha. Daawooyinka la qoro ama kuwa la iska iibsado ayaa loogu talagalay ardayga inuu isticmaalo oo keliya. Ardaygu waa inaanu ka iibin ama siin dawada loo qoray ama miiska la iska iibsado qofna dugsiga.
Wax ka qabadyadan waxay ku lug yeelan karaan ka saarida ardayga deegaanka iskuulka darnaanta anshaxa. Waxay ku lug yeelan karaan meeleynta ardayga jawi nabdoon oo bixiya qaab-dhismeed dheeri ah oo wax looga qabanayo dabeecadda. Waxqabadyadan waxay diiradda saarayaan ilaalinta nabadgelyada bulshada dugsiga iyo joojinta is-baabi'inta iyo / ama dhaqanka halista ah. Darnaanta anshaxa awgood, ogeysiiska booliska wuxuu awood u leeyahay in loo isticmaalo dhammaan dembiyada Heerka 4aad.
Ardayda waxaa laga filayaa inay u naxariistaan dadka kale
Ku Bilow Weerar
(waa inuu buuxiyaa marinka
Haysashada / Adeegsiga Khatar
Hubka Aan aheyn Qoriga Dabka
Haysashada / Adeegsiga Hubka Haysashada /
Adeegsiga Hub kale ama Shay,
maaha qori iyo inaanu la kulmin qeexida hubka khatarta ah ee Minnesota, iyadoo la adeegsanayo ama la doonayo in la isticmaalo
Kaqeyb gal dab
Ku Bilow Hanjabaadaha Rabshada
Meeleyn waxbarasho oo kumeelgaar ah
Dhageysiga maamulka halkii laga saari lahaa
U diritaanka ceyrinta
Ardaydu waa inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xuquuqda dadka kale
Iibinta Daroogooyinka ama Walxaha la Xakameeyo
Ardaydu waa inay adeecaan sharciyada badbaadada dabka oo ay ilaaliyaan nabadgelyada iskuulka. Ardaydu waa inaysan qorsheyn iyo / ama aysan kaqeybqaadan wax gubaya hantida. Isticmaalka dareeraha guban kara ama ololi kara waa mamnuuc.
Minn. Stat § 609.561 - 609.5632 (dabka la gubo 1aad ilaa 5aad)
Ardaydu waa inay caawimaad helaan markay u baahdaan inay xalliyaan dhibaatooyinka si aan rabshad lahayn. Ardaydu waa inaysan ku dhaqaaqin fal ula kac ah inay ku keenaan cabsi mid kale oo dhaawac jidhka ah ama dhimasho ah; ama ula kac u geysto ama iskudayo inuu waxyeelo jidheed u geysto qof kale.
Haysashada / Adeegsiga Hubka Halista ah ee aan ka aheyn Qoriga Dabka
Ardayda waxaa laga filayaa inay keenaan walxaha iyo waxyaabaha dugsiga loo baahan yahay ee loogu talagalay barashada iyo kaqeybgalka waxqabadyada. Ardaydu ma keeni karaan hub khatar ah dugsiga. Looma dulqaadan doono haysashada ama adeegsiga hub khatar ah arday kasta. “Hubka halista ah ee aan ahayn qori” waxaa lagu qeexaa:
Qalab kasta ama qalab kasta oo loo qaabeeyey hub ahaan oo awood u leh inuu soo saaro dhimasho ama dhaawac jidheed oo weyn;
Qalab kasta oo wax laga beddelay si loogu adeegsado hub ahaan oo awood u leh inuu soo saaro dhimasho ama dhaawac jidheed oo weyn;
Dareere kasta oo guban kara ama ololi kara ama qalab kale ama qalab kasta oo, habka loo isticmaalo ama loogu talagalay in loo isticmaalo, loo xisaabiyo ama laga yaabo inuu soo saaro dhimasho ama waxyeelo weyn oo jidheed;
Dab kasta oo loo adeegsado in lagu soo saaro dhimasho ama waxyeelo weyn oo jidheed;
Middi kasta oo leh daab la eg ama ka weyn 2.5 inji oo dherer ah;
Qori kasta oo nuqul ah, BB ama qoryaha pellet.
Minn. Stat § 609.02, subd. 8 (difaaca. Waxyeelo weyn oo jireed)
Minn. Stat § 609.02, subd. 6 (difaaca. Hubka halista ah)
Minn. Stat § 609.66, subd. 1d, 18 USC § 930 (g) (2) (difaaca hubka halista ah)
Haysashada / Adeegsiga Hubka
Ardayda waxaa laga filayaa inay keenaan walxaha iyo waxyaabaha dugsiga loo baahan yahay ee loogu talagalay barashada iyo kaqeybgalka waxqabadyada. Ardaydu ma keeni karaan qoriga dugsiga. Uma dulqaadan doono haysashada ama isticmaalka qori kasta oo arday ah. Hubka waa laga mamnuucay dhammaan guryaha ay leeyihiin ama ay gacanta ku hayaan Dugsiyada Aagga Robbinsdale. Qoriga waxaa lagu qeexaa Minn. Stat. 609.666, subd. 1 (a) oo ah aalad loogu talagalay in loo isticmaalo hub ahaan, taas oo laga soo saari karo mashruuc iyada oo loo adeegsanayo xoogga qaraxa ama xoogga gubashada.
Haysashada / Adeegsiga Hubka kale ama Ujeedada, ma ahan hub iyo la kulanka Minnesota Statute hubka qatarta leh, iyadoo la adeegsanayo ama looga dan leeyahay in la isticmaalo
Ardayda waxaa laga filayaa inay keenaan walxaha iyo waxyaabaha dugsiga loo baahan yahay ee loogu talagalay barashada iyo kaqeybgalka waxqabadyada. Ardaydu ma keeni karaan hub iskuulka. Hubka kale waxaa ka mid ah aalad ama qalab kasta - oo ay ku jiraan hub kasta oo aan caadi ahayn - kaas oo, qaabka loo isticmaalo ama loogu talagalay in loo isticmaalo, loo xisaabiyo ama laga yaabo inuu soo saaro waxyeelo jireed ama waxyeelo jidheed oo aad u weyn ama cabsi ah nooc kasta oo waxyeelo jidheed ah. Hubka kale waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn middiyo leh garbaha oo ka hooseeya 2.5 inji, mindiyo been abuur ah, hub u eg, kooxo, biro jilicsan, silsilado, sun, fallaaro, fiidmeerro, buurbuur, xiddigo tuuritaan, qoryo naxdin leh, malag iyo kuwa kale walxaha kale ee loo beddelay inay u adeegaan hub ahaan, iwm.
Minn. Stat § 609.02, subd. 7 & 7a (def. Waxyeelo weyn oo jireed, waxyeelo jireed oo weyn)
Minn. Stat § 609.713, subd. 3 (b) (2) (qoryaha hubka noocyadiisa kala duwan)
Ardayda waxaa laga filayaa inay keenaan walxaha iyo waxyaabaha dugsiga loo baahan yahay ee loogu talagalay barashada iyo kaqeybgalka waxqabadyada. Ardaydu ma iibin karaan mana qaybin karaan daroogooyinka sharciga ah ama sharci-darrada ah, daroogada synthetic / imitations, aalkolada ama walxaha kale ee la kontoroolo. Ardayda waxaa loo gudbin karaa qiimeynta isticmaalka kiimikada.
Minn. Stat § 152.01, subds. 1-22 (def. Walxaha la xakameeyo)
Minn. Stat §§ 152.021-152.025 (dambiyada maandooriyaha la xakameeyo ee 1aad ilaa 5aad)
Ardaydu waa inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xuquuqda dadka kale. Ardaydu waa inaysan kufsi ama ku xadgudbin galmo qof kale. Ardaydu waa inaysan ku lug yeelan galmo aan la ogolaan karin, xiriir galmo ama u bandhigid anshax xumo qof kale.
Ardayda waxaa laga filayaa inay u naxariistaan dadka kale. Ugu hanjabaya si toos ah ama si dadbanba in loo geysto dambi kasta oo rabshad ah iyada oo ujeedadu tahay in lagu argagaxo mid kale ama sababa daad-gureyn dhisme, meel isku imaatin ama gaari ama haddii kale ay keento dhibaato weyn oo dadweynaha ah ama si taxaddar la'aan ah loo tixgeliyo halista sababi karta argagax ama dhibaato.
Minn. Stat § 609.713 (def. Ee hanjabaadaha argagixisada)
Filashooyin iyo Tilmaamo Dheeraad ah
Xeerka Dharka Ardayda
Rajada Gaadiidka iyo Cawaaqibta
Nidaamyada Adeegyada Waxbarashada Kale
Tilmaamaha Anshaxa ee Ardayda Naafada ah iyo Carruurnimada Hore
Waxyaabaha laga filayo xeerka labbiska ardayda waxaa lagu qeexay: Nidaamka Maamulka 504AP: Dharka Ardayda iyo Muuqaalka .
Dharka ku habboon waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn waxyaabaha soo socda:
Dhar ku habboon cimilada.
Dhar aan abuurin khatar caafimaad ama badbaado.
Dhar ku habboon waxqabadka (sida waxbarashada jimicsiga ama fasalka).
Dharka aan habboonayn waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, kuwa soo socda:
Dhar muujinaya qaybo dhow.
Dharka xambaarsan farriin xun, edeb darro ama fisqi ah.
Dharka dhiirrigelinaya alaabada ama waxqabadyada ka mamnuuca ah isticmaalka carruurta yaryar.
Astaamaha, calaamadaha, astaamaha, calaamadaha, astaamaha, ereyada, walxaha ama sawirada dharka ama waxyaabaha la isku qurxiyo ee gudbinaya fariin cunsuriyad, jinsi ama haddii kale sharaf dhac ku ah kooxda laga tirada badan yahay ee la ilaaliyo, cadeynta ka mid noqoshada kooxaha gaangiska ama ka mid noqoshada, ama ogolaada ama horumariya nooc kasta oo diin ah, midab, ama dhibaateyn jinsi iyo / ama rabshado ka dhan ah shaqsiyaad kale sida lagu qeexay Xeerka Guddiga 413: Dhibaateynta iyo Rabshadaha .
Dhar kasta ama kabo kasta oo dhaawici kara hantida dugsiga.
Maaskarada, wajiga rinjiga ama dharka xaddidaya ama ka hortagaya aqoonsiga ardayga.
Dharka oo loo xidho qaab soo bandhiga dharka hoosta.
Waxyaabaha laga filayo gaadiidka iyo cawaaqibta waxay ku saleysan yihiin Nidaamka Guddiga 709: Gaadiidka Ardayda waxaana amraya sharciga gobolka. Sharciyada badbaadada baska degmada dugsiga ayaa lagu dhajiyaa bas kasta. Ardayda waxaa laga filayaa inay raacaan isla heerarka akhlaaqda inta ay raacaan basaska iskuulka, sida looga filayo hantida iskuulka ama howlaha iskuulka, howlaha ama munaasabadaha.
Raaca baska dugsiga waa mudnaan, maahan xaq. Sharciyada guud ee ardayda dugsiga degmada waxay dhaqangalayaan ardayda dhamaan basaska iskuulka, oo ay kujiraan ardayda iskuulada aan dowliga ahayn.
Cawaaqibta anshax-xumada baska / baska dugsiga waxaa ku soo rogi doona degmada dugsiga iyadoo la raacayo nidaamka edbinta maamul ee la qaatay. Dhamaan sharciyada iskuulka ayaa dhaqan gala inta ardaygu raacayo baska ama istaanka baska. Intaas waxaa sii dheer, anshax-xumada baska / baska dugsiga oo dhan waxaa lagu soo wargelin doonaa shaqaalaha gaadiidka degmada dugsiga. Anshax xumo daran ayaa loo gudbin doonaa Waaxda Badbaadada Dadweynaha waxaana laga yaabaa in lagu soo wargaliyo sharci fulinta deegaanka.
Xeerarka joogsiga baska
U kac baskaaga joogsiga shan daqiiqo ka hor wakhtiga aad qaadanaysid. Darawalka baska iskuulku ma sugi doono ardayda soo daaha.
Ixtiraam hantida dadka kale intaad ku sugayso joogsiga baskaaga.
Gacmahaaga, lugahaaga iyo alaabtaada haku kaydsan naftaada.
Adeegso luqad ku habboon.
Ka fogow wadada, wadada ama wadada weyn markaad baska sugeyso.
Sug inta basku istaagayo ka hor intaadan baska u dhowaan.
Kadib markaad baska ka degto, ka dhaqaaq baska.
Haddii ay tahay inaad ka gudubto jidka, had iyo jeer ka gudub baska hortiisa halka uu darawalku kugu arki karo. Sug inta darawalka kuu kuu sheegayo ka hor intaadan ka gudbin wadada.
Dagaal, cagajugleyn, cabsi gelin ama faras lagu ciyaaro malaha.
Looma isticmaali karo aalkolo, tubaako ama daroogo.
Isla markiiba raac tilmaamaha darawalka.
Fariiso kursigaaga oo horay u jeeda.
Si deggan u hadal oo isticmaal luqad ku habboon.
Dhamaan qaybaha jirkaaga ku hayso baska dhexdiisa.
Ha tuurin shay kasta.
Lama cunayo, la cabbo ama isticmaalka khamriga, tubaakada ama daroogada.
Ha ku soo qaadin wax hub ah ama waxyaabo khatar ah baska dugsiga.
Ha dhaawicin baska iskuulka.
Cawaaqibta sida looga baahan yahay Buug-gacmeedka Ardayga iyo Nidaamka Anshax ee degmada. Ardaydu waxay waayi karaan mudnaantooda baska iyadoo ay ugu wacan tahay anshaxa horumarka.
Haddii ardayga laga joojiyo in ka badan shan maalmood oo dugsiyeed, ardaygu wuxuu xaq u leeyahay adeegyo waxbarasho oo beddela oo u oggolaanaya ardayga inuu u horumaro xagga buuxinta shuruudaha qalin-jabinta. Ka-hakin ka badan shan maalmood oo dugsi waa inuu haystaa oggolaansho hore ee kormeeraha / wakiilka iyadoo ay sababtu tahay ka-hakinta dheer.
Adeegyada kale ee waxbarashada waxaa lagu qeexaa Minn. Stat § 121A.41 sida soo socota: "Adeegyada waxbarasho ee kale" waxaa ku jiri kara, laakiin aan ku xaddidnayn, umeerin gaar ah, manhaj la beddelay, tilmaam la beddelay, wax ka beddelid ama la qabsiyo kale, waxbarista iyada oo loo marayo warbaahinta elektaroonigga ah, Adeegyada waxbarashada gaarka ah sida ku cad qiimeynta habboon, barashada dib-u-celinta guriga, shaqa-guriyeedka la kormeero ama isqorista degmo kale ama xarun kale oo wax lagu barto oo hoos timaada qeybta 123A.05 oo la xushay si loogu oggolaado ardayga inuu u gudbo xagga heerarka qalin-jabinta ee hoos timaada qaybta 120B.01, in kastoo goob kala duwan.
Guud ahaan, Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale waxay bixiyaan adeegyo waxbarasho oo ka duwan kuwii hore sida ku xusan jadwalka soo socda:
Adeegyada Dugsiga ee La Bixiyay
Maamulaha la Siiyey ama Qofka Loo Magacaabay
Masuuliyada Waalidka / Masuulka
Ilaa shan maalmood oo iskuul ah Shaqada fasalka ee hadda iyo shaqada guriga ayaa la heli doonaa sida ugu dhakhsaha badan. Diyaarso aruurinta shaqada fasalka iyo casharrada guriga ee macallimiinta. Ka soo qaado shaqada fasalka iyo casharrada maamulka dugsiga ama diyaarso in guriga lagu geeyo. Ku soo celi shaqadii la dhammeeyay markii ardaygu ku soo noqday dugsiga.
Lix ilaa 10 maalmood oo iskuul ah Shaqada fasalka ee hadda iyo shaqada guriga ayaa la heli doonaa ugu dambayn maalinta lixaad ee dugsiga. Diyaarso aruurinta shaqada fasalka iyo casharrada guriga ee macallimiinta. Ka soo qaado shaqada fasalka iyo shaqada guriga maamulaha dugsiga ama diyaarso in lagu geeyo guriga. Ku soo celi shaqadii dhamaysay maamulka iskuulka.
Illaa 15 maalmood oo dugsiyeed (oo keliya inta eryidda laga sugayo ama marka ardaygu noqonayo khatar weyn oo degdeg ah) Diyaarso waxbarid ku socota warbaahinta elektaroonigga ah isla marka go'aanka la gaaro si loogu gudbiyo ardayga ceyrinta. Ka caawi maamulaha iskuulka dejinta jadwalka bixinta adeegyada ku xidhan guriga.
Maamulaha iskuulka ayaa mas'uul ka ah hubinta isku dayga iskuulka ee ah inuu bixiyo adeegyo waxbarasho oo ka duwan kuwii hore. Waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah waxay sidoo kale leeyihiin waajibaadka kor lagu soo sheegay. Waalidiinta wax ka tabta ee ku saabsan u hoggaansamida dugsiga ee nidaamyadan waa inay la xiriiraan maamulaha dugsiga ama Kaaliyaha Kormeeraha Guud.
Macluumaad dheeraad ah oo laxiriira ardayda waxbarashada gaarka ah: Dugsiyada Robbinsdale Area waxaa laga yaabaa inay waajibaad dheeraad ah saaraan ardayda waxbarashada gaarka ah ee aan halkan lagu sharxin. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan xuquuqda ardayda waxbarashada gaarka ah, eeg jaantuska ku yaal bogga soo socda, Nidaamka Badbaadinta Ogaysiinta Xuquuqda Waalidka ee Dugsiyada Dadweynaha ee Waxbarashada Gaarka ah ama la xiriir maamulaha dugsiga, maareeyaha kiiska ardaygaaga, ama Agaasimaha Waxbarashada Gaarka ah 763- 504-8070.
Soo Koobid Waxqabad Loo Baahan Yahay Oo Lagu Sharaxay Sharciga Kala-dirista Caruurta Minnesota ee Sharciga ah iyo IDEA
Shirka Kooxda IEP ayaa loo Baahan Yahay
Go'aaminta Caddaynta Ayaa Loo Baahan Yahay
* Waxaa Loo Baahan Yahay Qorshe Lagu Qiimeynayo Habdhaqanka Shaqada
Ardayga laga saaray dugsiga maalintiisii 1 ama ka yar Maya (1) Maya (1) Maya (1) Maya IEP Case qabaal Waxaa lagu tirinayaa 10-ka maalmood ee is biirsaday
Ardayga laga joojiyay wax ka yar 10 maalmood oo iskuul isku xiga Maya (1) Maya (1) Maya (1) Maya IEP Case qabaal Shan maalmood oo ah Adeegyada Waxbarashada Baddalka ah
Ardayga ayaa laga joojiyay 10 maalmood oo isku xigta iskuulka Haa Haa Maya (1) Haa IEP Case Manger, Isuduwaha, Kormeeraha FBA iyo BIP waa in dib loo eego
Ardayga waxaa laga saaray 10 maalmood oo isku dar ah sanad dugsiyeedka ama in ka badan
(Maalin kasta ka dib maalinta 10aad ee ka joojinta, kooxda IEP waa inay raacaan nidaamkan) Haa Haa (maalinta 10aad ama kahor) Haa Haa IEP Case Manger, Isuduwaha, Kormeeraha
FBA waa in la dhammaystiro. IEP waa inay kujirtaa Qorshe Dabeecad Haboon
Waa in la siiyaa adeegyo waxbarasho gaar ah / taageerooyin si horumar looga gaaro qalinjabinta
Ardayga la saaray iskuulka dhexdiisa Maya (3) Maya (3) Maya (3) Haa IEP Case qabaal
Waalidku wuxuu codsanayaa go'aaminta muujinta soo socota
ka saaris kasta sababo edbin awgeed Haa Haa Maya (1) Maya IEP Case qabaal
Ardayga ayaa laga joojiyay baska Ku xiran tahay (4) Ku xiran tahay (4) Ku xiran tahay (4) IEP Case qabaal
Ilaa ka saaridu ka dhigeyso wadarta tirada maalmaha isugeynta in ka badan 10 ama waalidku codsado kulan.
Ardaygu waa inuu helaa adeegyo ugu yaraan u dhigma adeegyada ardayga aan naafonimada qabin uu heli doono.
Ka joojinta iskuulka gudaheeda ama meelaynta xarunta waxbarashadda ee degmada wax laga beddelay looma tixgelin doono inay ka mid tahay maalmaha ka saarista illaa iyo inta ardayga la siinayo fursad uu ku sii wado inuu si habboon ugu sii socdo horumarka manhajka guud, uu sii wado helitaanka adeegyada lagu qeexay IEP iyada oo ay sii waddo kaqaybqaadashada ardayda aan naafada ahayn illaa heer ay ku yeelan lahaayeen meelayntooda hadda.
Haddii gaadiidka baska uu ka mid yahay IEP-ga ardayga, ka joojinta baska waxaa loola dhaqmi doonaa sidii saaritaan illaa dugsigu si uun u bixiyo gaadiid, maxaa yeelay gaadiidkaas ayaa lagama maarmaan u ah ardayga si uu u helo marinka meesha dhammaan adeegyada kale lagu geynayo. Haddii gaadiidka baska uusan ka mid ahayn IEP-ga ardayga, ka joojinta baska sida caadiga ah ma aha ka saarid.
* Ardayda naafada ah ee dhaqankoodu carqaladeeyo kaqeybgalka ardayga ee iskuulka, qiimeynta dabeecadaha shaqeynta (FBA) waa aalad muhiim ah oo lagu fahmo sababaha ardayga dhaqankiisa. Qorshaha faragelinta anshaxa (BIP) ka dib FBA wuxuu bixiyaa habab gaar ah oo wax looga qabanayo dhaqanka ardayga. Haddii mid la dhammaystiro, kooxdu waa inay shiraan si loo qiimeeyo loona hirgeliyo IEP-ga ardayga.
Ardayda Naafada ah iyo Ardayda leh Barnaamijka Waxbarida Shakhsiyeed (IEP)
Marka ardayga naafada ah laga joojiyo 5 maalmood oo isku xigta iskuulka ama wixii ka dambeeya maalinta iskuulka ee 10aad sannad dugsiyeedka gudihiisa, kooxda IEP waa inay kulmaan si ay u yeeshaan kulan go'aaminta muujinta ah. Kooxda ayaa go'aamin doonta haddii akhlaaqdu la xiriirto naafonimada ardayga.
Ka-eryidda hal maalin dugsi ama ka yar waa maalin dugsi ka-joojin haddii ardayga naafada ah uusan helin waxbarashadda caadiga ah ama waxbarashada gaarka ah inta lagu jiro xilliga cayrinta. Ardayga naafada ah waa in la siiyaa adeegyo waxbarasho oo beddel ah illaa inta ka-hakinku ka badan yahay shan maalmood oo isku xiga oo isku xigta. Kahor bilaabida cayrinta ama ka saarida, degmadu, xubnaha ay khusayso ee kooxda IEP ee ardayga iyo waalidka ardaygu waa, iyadoo la waafajinayo sharciga federaalka, go'aaminaya in dhaqanka ardaygu uu sababay ama uu xidhiidh toos ah oo la taaban karo la leeyahay naafonimada ardayga iyo in anshaxa ardaygu wuxuu ahaa natiijada tooska ah ee ku guuldaraysiga hirgelinta barnaamijka waxbarashada shaqsiyeed ee ardayga.
Markii arday naafo ah oo leh IEP laga saaro ama laga eryo anshax xumo aan muujinayn naafonimada ardayga, degmadu waxay sii wadi doontaa inay bixiso waxbarashada gaarka ah iyo adeegyada la xiriira inta lagu jiro ka saarista ama ka saarista.
Minn. Stat. A 121A.43
Ardayda Naafada ah / Qaybta 504 Arday
Ardayda uu daboolay Qaybta 504 ee Sharciga Dhaqancelinta ee 1973 waxaa laga yaabaa in lagu edbiyo anshax la xiriirta naafonimadooda, haddii anshaxu uusan keenin isbeddel weyn oo meelayn ah. Ardayda u qalma ee naafada ah lama eryi karo in ka badan 5 maalmood oo isku xigta oo isku xigta ama 10 maalmood oo isku darka iskuulka ah iyada oo aan la helin cadeyn ay muujinayaan kooxda 504 ardayga.
Tilmaamaha Anshaxa ee Ilmanimada Hore
Buug-gacmeedkani wuxuu dejinayaa siyaasadaha edbinta ee ardayda ku jirta fasallada K-12. Dugsiyada Robbinsdale Area waxay aqoonsan yihiin ardayda inay galaan barnaamijyada carruurnimada hore heerar kaladuwan ee u diyaargarowga dugsiga iyo sooyaallo kala duwan, sidaa awgeedna ardayda carruurnimada hore waxay muujiyaan dhaqammo iyo xirfado horumarineed oo "caadi ah". Shaqaalaha waxbarashadda carruurnimada hore waa inay adeegsadaan bey'ado taageero leh, tallaabooyin firfircoon, xoojin togan iyo istiraatiijiyado jawaabcelin leh si ay u hagaan oo u bartaan dhaqanka ardayga laga filayo. Carruurta ku jirta barnaamijyada waxbarashada carruurnimada hore lama eryi karo ama la eryi karo iyadoon oggolaansho laga helin maamulka heer wasiir.
Gudiga Maamulka iyo Badbaadada
Saraakiisha Kheyraadka Dugsiga (SRO)
Gudiga Maamulka iyo Badbaadada Maamulka ee Dugsiyada Robbinsdale Area waxay ujeedo leedahay inay hubiso in ardayda laga diiwaangeliyey jawi ku haboon barashada inay dhacaan. Waa mas'uuliyadda Gudbinta Maamulka iyo Badbaadada Maamulka inay go'aamiyaan habka ugu habboon ee waxqabadka oo ay ka mid yihiin oggolaanshaha codsiga maamulka ee wareejinta maamulka iyo xulashada goobta diiwaangelinta cusub ama diidmada codsiga.
Gudiga Maamulka iyo Badbaadada Maamulka waxay isticmaalaan shuruudo kala duwan, oo ay ku jiraan buug-gacmeedkan, qawaaniinta gobolka Minnesota, dib-u-eegista diiwaanada ardayga, xogta diiwaangelinta iyo dhaqamadii hore, si loo go'aamiyo meelaynta ugu habboon ee ardayga. Haddii a
ardaygu helo wareejin maamuleed, shaqaalaha iskuulka qaabilayaa waxay hirgalin doonaan dhaqamada si wanaagsan ugu taageeraya u gudbida ardayga (tusaale, u xilsaarida saaxiib, Check and Connect, dhaqanka heshiiska). Guddiga Beddelka iyo Badbaadada Maamulka ayaa kulmaya inta lagu jiro sanad dugsiyeedka waxayna ku dadaalayaan inay hubiyaan in codsi kasta la hubiyo iyadoo la tixgelinayo danaha ugu wanaagsan ee ardayga, qoyska iyo shaqaalaha. Xubnaha Guddiga Wareejinta iyo Badbaadada Maamulka waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn shaqaalaha ka socda waaxaha Dugsiyada ee Robbinsdale ee soo socda: Xubnaha Golaha Wasiirrada, Maamulayaasha Dhismaha, Guusha & Is-dhexgalka, Waxbarashada Gaarka ah iyo Barnaamijyada Federaalka.
Saraakiisha Kheyraadka Dugsiga (SRO's) waa saraakiil la dhaariyay oo matalaya bulshadayada. Shaqada SRO oo ay iskaashanayaan maamulayaasha iskuulka ee dugsiyada dhexe iyo sare si ay ulashaqeeyaan bulshada iskuulka si loo helo jawiga waxbarasho ee ugu amaanka badan. Shaqada aasaasiga ah ee SRO waa fulinta sharciga. Maamulayaasha iskuulku waxay la tashan doonaan SRO markay dambi ka galaan iskuulka. Haddii ardaygu ku xad gudbo nidaamka degmada ee sidoo kale jabiya sharciga, xiriir ayaa laga yaabaa in lala sameeyo fulinta sharciga deegaanka si wax looga qabto. SRO sidoo kale waxay u adeegtaa ilaha barnaamijka waxbarida ee iskuulka marka macluumaadka la codsado ee ku saabsan sharci fulinta ama sida jawaabayaasha ugu horeeya ugu adeegaan bulshadooda.
Kooxda Dhibaatooyinka Dhismaha-anshax-marinta badan ama wakiilka kooxda ayaa qiimeyn doona hanjabaadaha rabshada ee naftiisa ama dadka kale iyo dabeecadaha hanjabaada ah, waxayna go'aamin doonaan suurtagalnimada in qofku fuliyo hanjabaad. Qiimaynta hanjabaadu waxay ku lug leedahay saddex qaybood oo waaweyn oo ay ka mid yihiin aqoonsiga halista, qiimeynta halista halista iyo maaraynta iyada oo loo marayo qorshooyinka wax ka qabashada. Dhammaan hanjabaadaha waa la tixgelin doonaa
culus oo si sax ah loo baaro. Meelmarinta sharciga oo ay kujiraan Saraakiisha Kheyraadka Dugsiga waa lala xiriiri karaa si looga caawiyo qiimeynta hanjabaada. Ujeedada qiimeynta qatarta hanjabaada ayaa ah in lagu hago kooxda qiimeynta halista ku saleysan goobta iyadoo la marayo hanaan xog uruurin ah oo ka dhalan doona qorshe kormeer ah oo lagu badinayo amaanka ardayda. Kooxda Dhibaatooyinka Degmadu waa inay bixiyaan tababar, ilo iyo caawimaad goobta marka
Hagaha Waalidka / Mas'uulka iyo Diidmada Kaqeybgalka Ardayda ee Foomka Imtixaanka ee Gobolka
Imtixaanada Dhamaystiran ee Minnesota (MCAs) iyo qiimaynta kale, Imtixaanka Minnesota ee Xirfadaha Tacliineed (MTAS), waa imtixaanada gobolka oo dhan ka caawiya degmooyinku inay cabiraan horumarka ardayga ee heerarka tacliimeed ee Minnesota iyo inay buuxiyaan shuruudaha Sharciga Dugsiyada Hoose iyo Sare (ESEA) . Ardaydu waxay galaan hal imtixaan maaddo kasta. Ardayda badankood waxay qaataan MCA, laakiin ardayda qaata adeegyada waxbarashada gaarka ah ee la kulma shuruudaha u-qalmitaanka waxay qaadan karaan MTAS.
FADLAN OGOW: Dhibcaha Qiimaynta Buuxda ee Minnesota waxaa loo isticmaalaa go'aaminta meelaynta koorsada ee Kulliyadaha iyo Jaamacadaha Gobolka Minnesota. Dhibcaha MCA ee ardaygu wuxuu badbaadin karaa qoysaska lacag aad u tiro badan iyadoo la muujinayo in ardayda aysan u baahnayn inay qaataan buundo-darro
koorsooyinka horumarka. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo bogga internetka ee MDE.
Macluumaadka Amniga ee Imtixaanka ee Ardayda
Tijaabi Walaacyada Amniga
Su'aalaha Had iyo Jeer La Is Weydiiyo: Maxay Tahay Sababta Natiijooyinka Imtixaanku U Gaadhayo Gobolka oo Dhan
Kaqeybgalka Ardayda ee Qiimaynta Gobolka oo dhan
Iyada oo qayb ka ah dhaqanka hufnaanta tacliimeed, qoysaska iyo ardayda waxaa la xusuusinayaa muhiimadda amniga imtixaanka. Ardayda waxaa laga filayaa inay xafidaan waxyaabaha ku jira imtixaanka oo ay u shaqeeyaan si daacadnimo iyo hufnaan leh inta lagu jiro maamulka imtixaanka. Degmadu waxay ka rajeyneysaa ardayda inay sameeyaan waxyaabaha soo socda:
Ardaydu waa inay qabtaan shaqadooda ugu fiican si ay u muujiyaan waxay yaqaanaan iyo waxay sameyn karaan.
Ardaydu waa inaysan aqbalin caawinta helitaanka jawaabaha shayada.
Ardaydu maahan inay jawaabo siiyaan ardayda kale.
Ardaydu waa inaysan u sheegin dadka kale waxa ku jira imtixaanka.
Waxaa jiri kara cawaaqib xumo haddii ardaydu aysan raacin tilmaamaha ama haddii ay u dhaqmaan si aan daacad ahayn.
Ardaydu MA isticmaali karaan taleefannada gacanta, tiknoolajiyada la gashado (tusaale ahaan, saacadaha casriga ah, raadraacayaasha jimicsiga) ama qalab kale (marka laga reebo aaladda dugsiga uu leeyahay ee loo isticmaalay baaritaanka) waqti kasta oo lagu jiro imtixaanka, oo ay ku jiraan xilliyada nasashada. Ardaydu maahan inay adeegsadaan qalabkan xitaa marka imtixaanku dhammaado. Haddii imtixaan laga qaado iskuulka oo dhan loo qoondeeyo waqti go'an, qalabka waa in aan la isticmaalin inta lagu jiro waqtigaas, xitaa haddii ardaygaasi dhammeeyey imtixaankiisa.
Kormeerayaasha Imtixaanka waxaa laga filayaa inay ku wargeliyaan ardayda inaysan heli karin ama arki karin wicitaannada, qoraallada ama digniinta inta lagu jiro maamulka imtixaanka. Haddii ardaygu haysto taleefanka gacanta ama qalab kale oo elektiroonig ah qolka imtixaanka, habraacyada soo socda ayaa la raacayaa:
Ardaygu waa inuu ka xidhaa taleefanka gacanta (ama qalab kale) DIL (ma aha oo kaliya in la aamuso, maadaama digniinta shaqsiyadeed ay wali sii jiri karto).
Ardayga waxaa la siiyaa baqshad. Baqshaddu waa inay dabooshaa waxyaabaha ku jira taleefanka (qalab) - ma noqon karto baqshad cad.
Ardaygu wuxuu taleefanka (aaladda) baqshadda ku dhejiyaa, oo uu baqshadda xiraa oo uu bakhshadda ku kaydiyaa meel aan laga geli karin inta lagu jiro imtixaanka.
Haddii ardaygu helo ogeysiis (tusaale, cod-dhawaaq, gariir) inta lagu jiro imtixaanka, ardaygu waa inuu u dhiibo taleefanka (aaladda, taas oo ah inay ku jirto baqshadda) kormeerka Imtixaanka.
Ardayda sidoo kale ma xiran karaan ama ma heli karaan tiknoolajiyad la gashado inta lagu jiro imtixaanka haddii aaladda elektiroonig ahaan ay u diri karto ama u heli karto macluumaad. Haddii mid ka mid ah aaladahaas la xirto inta lagu jiro imtixaanka, imtixaanka ardayga waa inuu noqdaa mid aan ansax ahayn maxaa yeelay aaladda waa la arki karaa waana la heli karaa, iyadoo aan loo eegin haddii la isticmaalay iyo in kale.
Haddii aad wax walaac ah ka qabtid shilalka looga shakiyo ee qishka ama dhaqan kale oo aan habboonayn ama anshax xumo ah oo ku saabsan qiimeynta gobolka oo dhan, waxaad u soo sheegi kartaa macluumaadkaas maamulaha dugsigaaga, waaxda Cilmi-baarista, Qiimeynta iyo Qiimeynta ee degmada ( REA@rdale.org ama 763-504 -8103), ama adoo gudbinaya Warbixinta Amniga ee Imtixaanka Degmada .
Joogtaynta sharafta imtixaanada iyo waxyaabaha imtixaanku muhiimad weyn ugu leeyahay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota. Anshax xumo ama anshax xumo ardayda ama barayaashu waxay wiiqaysaa ansaxnimada tarjumaada dhibcaha imtixaanka. Waxaad sidoo kale soo sheegi kartaa shilalka looga shakiyo ee qishka ama burcadbadeednimada ee waxyaabaha imtixaanka iyadoo la adeegsanayo Khadka Tilmaamaha Amniga ee Imtixaanka Gobolka Minnesota oo dhan ama la xiriir Waaxda Waxbarashada ee Minnesota ( mde.testing@state.mn.us ama 651-582-8674).
Imtixaanada gobolka Minnesota oo dhami waa ujeedo, cabirro lagu cabbiray ee ku-guuleysiga ardayda ee heerarka tacliinta ama aqoonta. Ardayda, qoysaska, macallimiinta iyo maamulayaasha waxay u isticmaalaan natiijooyinka imtixaanka gobolka oo dhan iyagoo qayb ka ah nidaam dhammaystiran oo lagu qiimeeyo barashada. Jawaabaha su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee sharaxaya ujeedada imtixaanka gobolka oo dhan iyo sababta ay muhiim u tahay in la hubiyo hufnaanta dhibcaha imtixaanka fadlan eeg Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo: Maxay Tahay Sababta Natiijooyinka Imtixaanka Gobolka oo Dhan ( Ingiriis , Soomaali ama Isbaanish ).
Xeerarka Minnesota, qaybta 120B.31, hoosaadka 4a, waxay u baahan tahay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE) inay u soo daabacdo foom waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah inay soo buuxiyaan haddii ay diidaan inuu kaqeybqaato ardaygooda qiimeynta heerarka looga baahan yahay ee gobolka. Tilmaamaha Waalidka / Mas'uulka ee dukumiintiga Imtixaanka Gobolka oo dhan wuxuu bixiyaa macluumaad aasaasi ah si looga caawiyo waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah inay gaaraan go'aano xog-ogaal ah oo waxtar u leh ardaygooda, dugsigooda iyo bulshada. Foomka lagu buuxinayo shuruuddan sharci-dejinta waxaa laga heli karaa xiriirka hoose; waa in lagu soo celiyaa degmada ardaygaaga. Degmada ardaygaagu waxay u baahan kartaa macluumaad dheeraad ah. Hagaha Waalidka / Masuulka iyo Diidmada Kaqeybgalka Ardayda ee Foomka Imtixaanka Gobolka oo dhan ( Ingiriis , Soomaali ama Isbaanish ).
Siyaasadda Guddiga 531: Ballanqaadka Daacadnimada
Adeegsiga Badbaadada iyo La Oggol yahay ee Shabakadda / Internetka
Heshiiska Adeegsiga Waalidka: Qalabka Dijital ah (2020-2021)
Qorshaha Ilaalinta Qalabka 2020-2021 iyo Qiimaha Burburka / Beddelka
Sidee Naloo Gaadhaa
Xiriirinta Macluumaad Dheeraad ah
Nidaamyada iyo Nidaamyada Guddiga Dugsiga
La ansaxiyay: Meey 7, 2012
Guddiga dugsigu wuxuu aqoonsan yahay baahida loo qabo in la muujiyo calanka Mareykanka ee habboon iyo in ardayda la siiyo tilmaamo ku saabsan aadaabta, muujinta, iyo ixtiraamka calanka. Ujeedada siyaasaddani waa in la bixiyo akhrinta Ballan-qaadka Daacadnimada iyo tilmaamidda dugsiga si loo caawiyo sii socoshada dhammaadka.
II. HADALKA GUUD EE SIYAASADDA
Ardayda degmadani waa inay akhriyaan Ballanqaadka Daacadnimada calanka Mareykanka hal mar ama in ka badan toddobaad kasta. Akhrinta waa in la qabtaa:
A. Shaqsi kasta oo macalinka fasalka ah ama ku-xigeenka macallinka; ama
B. Shaqsi walba macalinkiisa fasalka ama ku-xigeenka macallinka; ama
III. KA REEBAN
Qof kasta oo aan rabin inuu kaqeyb qaato akhrinta Ballanqaadka Daacadnimada sababo shakhsiyadeed awgood ayaa dooran kara inuusan sameynin. Ardayda iyo shaqaalaha iskuulka waa inay ixtiraamaan xaqa qof kale u leeyahay inuu doorto.
Ardayda waxaa la bari doonaa anshaxa saxda ah ee ku wajahan, muujinta saxda ah, iyo ixtiraamka calanka, iyo layliyada wadaniyada.
Minn. Stat. A 121A.11, Qodob. 3 (Ballanqaadka Daacadnimada)
Minn. Stat. A 121A.11, Qodob. 4 (Waxbarid)
Degmadu waxay siineysaa ardayda kombuyuutar degmo dugsiyeed, nidaamyo cod iyo muuqaal ah, oo ay kujirto marinka Internetka. Isticmaalka saxda ah ee qalabka elektarooniga ah ee degmada, nidaamyada iyo marin u helka internetka, iyo qiimaha waxbarasho ee laga helayo isticmaalka saxda ah ee internetka, waa masuuliyada wadajirka ah ee ardayda, waalidiinta iyo shaqaalaha degmada dugsiga. Ujeeddada nidaamku waa mid ka gaar ah sidii ardayda loo siin lahaa guud ahaan marinka internetka. Ardayda waxaa laga filayaa inay si xilkasnimo leh u isticmaalaan qalabka elektaroonigga ah ee degmada, nidaamyada iyo marin u helka Internetka iyadoo la raacayo Nidaamka Guddiga 524: Isticmaalka iyo Nidaamka Badbaadada Internetka ee La Aqbali Karo .
Qirashada iyo aqbalida buuga habdhaqanka ardayga waxay ka dhigan tahay ogeysiis iyo aqbalida Nidaamka Gudiga 524: Isticmaalka Internetka Nidaamka Isticmaalka iyo Amniga .
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay siisaa arday kasta oo fasalada K-12 ah qalab digital ah. Qalabkan waxaa loo isticmaali doonaa in lagu xiro iskuulada ardayda iyo qoysaska, loona ogolaado ardayda inay isku muujiyaan siyaabo cusub oo xiiso leh, iyo inay shakhsi ahaan khibrad waxbarasho u yeeshaan arday kasta.
Qalabka dhijitaalka ah badanaa waa Chromebook ama iPad. Isticmaalka internetka ayaa loo baahan yahay inta badan shaqada ardayda si loo keydiyo loona wadaago. Haddii ardaygaagu uusan haysan internet, fadlan la xiriir dugsigaaga si aad u hesho macluumaad ku saabsan fursadaha internet-ka ee qiimaha jaban ee qoyskaaga. Meelo kala duwan oo bulshada ka mid ah ayaa sidoo kale bixiya internet bilaash ah oo bilaash ah, oo ay ku jiraan maktabadaha dadweynaha. Xarumaha Warbaahinta waxay leeyihiin tiro kooban oo kulkulul (aaladaha wifi internetka ee mobilada).
Qalabka dijitaalka ah iyo agabyada kale waa hantida Dugsiyada Robbinsdale Area waana in lagu celiyaa Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale dhammaadka sannad dugsiyeed kasta ama marka laga baxo dugsiga. Ganaaxyada waxaa lagu qiimeyn doonaa waxyeelada dayacaada ama qalab lumay, xeedho ama kiis. Qalabka iyo agabyada aan lagu soo celin taariikhda ardaygu ka baxayo dugsiga ayaa lagu soo wargalinayaa inay yihiin kuwo loo xaday waaxda booliska ee deegaanka.
Qorshaha Ilaalinta Qalabka
Iyada oo lagu dadaalayo in laga ilaaliyo qoysaska kharashyada aan la garaneyn ee ka imaan kara xatooyada ama waxyeelada shilka ah inta aaladda ay gacanta ku hayso cunugaaga, degmadu waxay bixinaysaa qorshe ilaalin qalab. Khidmadda qorshaha ilaalinta aaladda waa $ 25 sanad dugsiyeedkiiba ardayga ama $ 5 sanad dugsiyeedkiiba ardaykiiba qoysaska uqalma qado bilaash ah / dhimis ah. Haddii aad su'aalo ka qabtid qorshaha ilaalinta aaladda, fadlan la xiriir maamulaha iskuulka.
Qorshaha badbaadintu wuxuu daboolayaa dhaawaca shilka ugu horreeya. Ka-goynta ayaa loo adeegsadaa sheegashooyinka xiga (eeg qaybta xigta, hoose).
Xeedho iyo kiiska ma daboolin qorshaha ilaalinta aaladda.
Haddii aaladdaada la xado, keen caddeyn in warbixin booliis la xareeyay.
Burburka ka dhashay isticmaalka xun ma daboolayo qorshaha ilaalinta aaladda.
Qalabyada dhijitaalka ah iyo agabyada kale waa hantida Dugsiyada Aagga Robbinsdale waana in lagu celiyaa Dugsiyada Aagga Robbinsdale dhammaadka sannad dugsiyeed kasta ama marka laga baxo dugsiga. Ganaaxyada waxaa lagu qiimeyn doonaa waxyeelada dayacaada ama qalab lumay, xeedho ama kiis. Qalabka iyo agabyada aan la soo celin taariikhda ardaygu ka baxayo dugsiga ayaa lagu soo wargelin doonaa sidii loo xaday waaxda booliska ee deegaanka.
Isticmaalka Mas'uulka ah iyo Daryeelka Qalabka
Fadlan si taxaddar leh u qabso aaladda oo hubi in ardaygaagu:
Qalabka keena dugsiga maalin kasta, oo si buuxda u shaqeeya.
Wuxuu ku kaydiyaa oo ku dalacaa aaladda meel aamin ah, ilaalin leh.
Wuxuu adeegsadaa kiiska la siiyay oo wuxuu leyliyaa daryeelka marka qalabka la rarayo.
Si dhakhso ah ugu soo wargeliyaa wixii dhibaato ama dhaawac ah macallinka ama shaqaalaha xarunta warbaahinta maktabadda.
Saxeexida kaarka ictiraafka micnaheedu waa inaad ardaygaaga kalahadashay adeegsiga mas'uuliyadda iyo daryeelka habboon ee aaladda, adoo xoojinaya adeegsiga aaladda ujeeddooyin waxbarasho.
Ardaygaaga ayaa masuuliyadi ka saran tahay u hogaansanaanta Nidaamka Gudiga 524: Isticmaalka Internetka ee La Aqbali Karo iyo Nidaamka Badbaadada iyo Xeerka Gudiga 514: Mamnuuca Cagajuglaynta sida ku xusan Buug-gacmeedka Ardayda: Xuquuqda iyo Mas'uuliyadaha. Ururka ' Common Sense Media organization' wuxuu bixiyaa macluumaad la xiriira muwaadinimada dhijitaalka ah iyo hagitaano looga hadlayo isticmaalka tikniyoolajiyada ee qoyska.
Heshiiska Adeegsiga Waalidka: Aaladda Dijital ah (2020-2021)
Caymiska Burburka Shilka
Iyada oo lagu dadaalayo in qoysaska laga ilaaliyo kharashyada aan la garaneyn ee ka imaan kara xatooyada ama waxyeelada shilka ah inta aaladda ay gacanta ku heyso ardaygaaga, degmadu waxay siineysaa qorshe ilaalin qalab Khidmadda qorshaha ilaalinta aaladda waa $ 25.00 sanad dugsiyeedkiiba ardaygii, ama $ 5 sanad dugsiyeedkiiba ardaykiiba qoysaska uqalma qado bilaash / dhimis ah. Haddii aad su'aalo ka qabtid qorshaha ilaalinta aaladda, fadlan la xiriir maamulaha iskuulka.
Qorshaha badbaadintu wuxuu daboolayaa marka hore dhaawaca shilka. Ka-goynta lacagta ayaa lagu dabaqayaa sheegashooyinka dambe.
Xeedho iyo kiiska qorshuhu ma daboolmayo.
Burburka ay sababtay adeegsi qaldan qorshaha ma daboolayo.
Qorshaha Badbaadinta Aaladda: $ 25
Ama $ 5 ardaykiiba qoysaska uqalma qado bilaash ah / la dhimay
Dhaawaca La Jarayo
Dhacdada koowaad (sanad dugsiyeedkiiba): oo leh qorshe ka hortag qalab - kharash la'aan ah; iyada oo aan la helin qorshaha ilaalinta aaladda - $ 60.
Dhacdada labaad (sanad dugsiyeedkiiba) *: oo leh qorshe ilaalin qalab - $ 25 (midkiiba); iyada oo aan la helin qorshaha ilaalinta aaladda - $ 60 (midkiiba).
* Sidoo kale wuxuu abuuraa tixraac edbin "farsamo xumo ah".
Fadlan ogsoonow: waxyeelada ula kac ah ma daboolayo qorshaha ilaalinta aaladda. Dayactirka buuxa ama kharashka beddelka ah ayaa ardayga loo qiimeyn karaa.
Xatooyo ama Khasaare Dhimis
Xatooyada oo ay la socdaan warbixin boolis (sanad dugsiyeed kasta): oo leh qorshe ilaalin qalab - $ 50 (midkiiba); iyada oo aan la helin qorshaha ilaalinta aaladda - $ 100 (midkiiba).
Khasaara dartiis (dayac ahaan sanad dugsiyeed kasta): oo leh qorshe ilaalin qalab - $ 100 (midkiiba); iyada oo aan la helin qorshaha ilaalinta aaladda - $ 150 (midkiiba).
Kaarka Heshiiska Ardayga / Qoyska
Lambarka ugu weyn: 763-504-8000
Xarunta Adeegga Waxbarashada 4148 Winnetka Avenue North, New Hope
Xannaanada Carruurnimada Hore
Adeegyada Cuntada / Adeegyada Nafaqada
Akadeemiyada Virtual Robbinsdale
Lambarka ugu muhiimsan: 763-504-7900
Dugsiga Hoose Lakeview
Lambarka ugu weyn: 763-504-4100
Lambarka ugu muhiimsan: 763-504-7700
6600 Medicine Lake Lake, Crystal
Lambarka ugu weyn: 763-504-7400
2601 Noble Avenue North, Dahabka Dahabka ah
Lambarka ugu weyn: 763-504-4000
Dugsiga Hoose Northport
5421 Brooklyn Boulevard, Xarunta Brooklyn
Lambarka ugu weyn: 763-504-7800
3421 Boone Avenue North, Rajo Cusub
Lambarka ugu weyn: 763-504-7600
Lambarka ugu weyn: 763-504-7300
10011 36th Avenue North, Plymouth. 10011 36th Avenue Waqooyiga, Plymouth
Lambarka ugu weyn: 763-504-7100
Lambarka ugu muhiimsan: 763-504-4800
400 Sandburg Lane, Dooxada Dahabka ah
Lambarka ugu muhiimsan: 763-504-8200
10635 36th Avenue North, Plymouth. 10635 36th Avenue Waqooyiga, Plymouth
Lambarka ugu weyn: 763-504-8800
8230 47th Avenue North, Rajo Cusub
Lambarka ugu weyn: 763-504-8500
2400 Sandburg Lane, Dooxada Dahabka ah
Lambarka ugu muhiimsan: 763-504-8703
FAIR School Crystal (fasalada 5-8)
Lambarka ugu muhiimsan: 763-971-4501
LAYNKA Xajka ee FAIR (fasalada K-4)
3725 Xajka Xajka Waqooyiga, Plymouth
Lambarka ugu weyn: 763-504-8400
8808 Wadada Lake Lake, Rajo Cusub
Lambarka ugu weyn: 763-504-4400
Iskuulka Injineerinka iyo Farshaxanka (SEA)
1751 Kelly Drive, Dooxada Dahabka ah
Lambarka ugu muhiimsan: 763-504-7200
Aragtida Degmada ee Midaysan: Waxqabadka Garaadka Sare ee loo maro Sinnaanta ayaa ah qorshaha istiraatiijiyadeed ee xilligan loogu talagalay Dugsiyada Aagga Robbinsdale. La ansaxiyay 2014, qorshahan waa balan qaad ay sameysay bulshada oo dhan si loogu diyaariyo dhamaan ardayda inay noqdaan xirfad, xirfado qeexan iyo kulleej diyaar ah.
Nidaamka Taageerada Badan ee Tijaabinta (MTSS) Buug-gacmeedka
Nidaamka Taageerada badan ee Tixraaca Buug-yaraha wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan qaab-dhismeedka degmada ee ka caawinta dhammaan ardayda inay guuleystaan iyadoo la waafajinayo waxbaridda, wax ka qabadka iyo qiimeynta baahida shaqsiyadeed ee ardayda.
Websaydhka Adeegyada Ardayda ee Dugsiyada Robbinsdale waxaa ku jira macluumaad waxtar leh oo ku saabsan nashaadaadka iyo ciyaaraha fudud, barnaamijyada beddelka ah, ilaha dhaqannada, ilaha caafimaadka, adeegyada la beegsaday iyo qorshooyinka Qaybta 504.
Sharciga Xilka Qaadista Ardayda Caddaalad ah
Sharciga eryida ardayga cadaalada ah waxaa kamid ah siyaasadaha, sababaha iyo habraacyada looga ceyrinayo ardayda dhigata iskuulada dowlada ee Minnesota (Minn. Stat. §§ 121A.40-121A.56).
Horyaalka Dugsiga Sare ee Gobolka Minnesota
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay ka qaybgalaan Horyaalka Dugsiga Sare ee Gobolka Minnesota. Leegadu waxay u jirtaa inay bixiso fursado tartan, sinnaan iyo labis isku mid ah ardayda dugsiga sare si ay u bartaan casharo qiimo leh iyada oo laga qayb qaadanayo ciyaaraha fudud iyo farshaxanka. Siyaasadaha khuseeya u-qalmitaanka, isboortiga, caafimaadka kiimikada iyo aqoonsiga deeqda waxbarasho ayaa ku qoran websaydhka League-ga.
Waaxda Adeegyada Caafimaadka Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay dooneysaa inay abuurto oo joogtayso jawi iskuul oo dhiirrigeliya oo taageera caafimaadka ardayga, fayoobaanta iyo hanashada tacliinta. Cilmi baaris ayaa muujisay in ardayda caafimaadka qabta ay yihiin kuwa waxbarta.
Waaxda Gaadiidka waxaa ka go'an inay bixiso khibrad wanaagsan oo aamin ah oo loogu talagalay kuwa raacda basaska dugsiga degmada. Macluumaadka jadwalka baska dugsiga waxaa si joogto ah loogu soo diraa qoysaska ku nool Dugsiga Aagga Robbinsdale ka hor maalinta koowaad ee dugsiga. Macluumaad dheeri ah oo gaadiid ah ayaa laga heli karaa bogga waaxda.
Foomka Warbixinta Ceebta, Rabshadaha, Takoorka ama Xoog u sheegashada
Haddii adiga ama qof aad taqaanid uu la soo kulmay dhibaateyn, rabshad, takoorid ama xoog sheegasho iskuulka ama dhacdooyinka iskuulka la xiriira sabab kasta ha noqotee, waxaad sameyn kartaa warbixin si ay dhacdadu u baaraan degmadu. Arday kasta, waalid / ilaaliye ama shaqaale degmo ayaa buuxin kara foomkan una soo celin kara maamule kasta, la-taliye ama u-doodaha adeegyada ardayda.
Barnaamijyada iyo adeegyada gaarka ah ee Dugsiyada Robbinsdale Area waxaa loogu talagalay inay daboolaan baahiyaha carruurta iyo dhallinta da'doodu tahay dhalashada illaa 21 jir ee leh naafooyin kala duwan. Waaxda Waxbarashada Gaarka ah waxay haysaa macluumaad iyo ilo qoysaska oo ay weheliso waxqabadyada degmada.
Nidaamyo iyo nidaamyo dheeri ah ayaa laga heli karaa qaybta Guddiga Dugsiga ee degelkan. Hoos waxaa ku yaal liiska siyaasadaha khuseeya Buug-gacmeedka Xuquuqda iyo Mas'uuliyadda Buug-gacmeedka iyo Mas'uuliyadaha oo leh xiriirin xagga siyaasadda ah.
Nidaamka Gudiga Nr. 102 - Fursado Waxbarasho oo loo siman yahay
Nidaamka Gudiga Nr. 413 - Dhibaateynta iyo Rabshadaha
Nidaamka Gudiga Nr 501 - Hubka Iskuulka
Nidaamka Gudiga Nr. 502 - Raadinta Sanduuqyada Ardayda, Miisaska, Hantida Qofka, iyo Qofka Ardayga
Xeerka Gudiga Nr 503AP - Imaanshaha Ardayda
Nidaamka Gudiga Nr 503AP - Imaanshaha Ardayda (Isbaanish)
Xeerka Gudiga Nr 504AP - Dharka Ardayga iyo Muuqaalka
Nidaamka Gudiga Nr. 505AP - Qeybinta Agabyada Dugsiyada Aan Isboortiga Laheyn ee Dhismayaasha Dugsiga ee Ardayda iyo Shaqaalaha
Xeerka Gudiga Nr 507AP- Ciqaabta Jirka
Nidaamka Gudiga Nr. 510AP - Waxqabadyada Dugsiga
Nidaamka Gudiga Nr 512AP - Daabacaadda iyo Waxqabadyada Ardayda Dugsiga Kafaala Qaaday
Nidaamka Guddiga Nr 514 - Siyaasadda Mamnuuca Xoogsheegashada
Nidaamka Gudiga Nr 515 - Ilaalinta iyo Asturnaanta Diiwaanada Ardayda
Nidaamka Gudiga Nr 516 - Daawada Ardayda
Nidaamka Gudiga Nr. 521 - Takoor la'aanta Naafada Ardayda
Nidaamka Gudiga Nr. 522 - Jinsiga Ardayga ama Jinsiga Takoor La'aanta
Xeerka Gudiga Lambar 524 - Isticmaalka Internetka iyo Siyaasada Badbaadada
Xeerka Gudiga Nr. 525AP - Kahortaga Rabshadaha
Nidaamka Gudiga Nr. 526 - Mamnuuca Xaragada
Nidaamka Gudiga Nr. 527AP - Isticmaalka Ardayda iyo Baarkinka Baabuurta: Gawaarida, Kormeerka, iyo Raadinta
Nidaamka Gudiga Nr. 528AP - Kala-sooc la'aanta Waalidka, Qoyska, iyo Xaaladda Guurka
Xeerka Gudiga Nr. 529AP - Ogeysiiska Shaqaalaha ee Habdhaqanka Rabshada leh ee Ardayda
Siyaasadda Gudiga No. 531 - Ballanqaadka Daacadnimada
Nidaamka Gudiga Nr. 532 - Adeegsiga Saraakiisha Nabada iyo Kooxda Dhibaatooyinka si looga saaro Ardeyda IEP dhigata Dhulka Dugsiyada
Xeerka Gudiga Nr. 534AP - Lacagta Cuntada Aysan Bixin
Nidaamka Gudiga Nr. 580AP - Waxbarashada Ardayda Guri La'aanta ah
Nidaamka Gudiga Nr. 707AP - Gaadiidka Ardayda Dugsiyada Dadweynaha
Nidaamka Gudiga Nr. 708AP - Gaadiidka Ardayda Dugsiyada Aan Dawliga Ahayn
Xeerka Gudiga Nr 709 - Badbaadada Gaadiidka Ardayda
Nidaamka Gudiga Nr. 710AP - Gaadiidka ka baxsan manhajka
Nidaamka Gudiga Nr. 711AP - Duubista Fiidiyowga ee Basaska Dugsiga
Xeerka Gudiga Nr. 712AP - Kormeerka Fiidiyowga ee aan Ka aheyn Basaska
Xeerka Gudiga Nambarkiisu yahay 801AP - U sinaanta Adeegyada Xarumaha Iskuulka
Siyaasadda Guddiga Lambarka 806 - Maareynta Dhibaatooyinka
Nidaamka Gudiga Lambar 807- Caafimaadka iyo Badbaadada
Nidaamka Gudiga Lambar 899 - Gawaarida / Diyaaradaha Drones-ka
Dugsiyada Aagga Robbinsdale - Siyaasadda Sinnaanta